6 Tree Guard Grating Paver Frame Cover frame grille protects the base of the tree. With both built and finished. – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
Grate Frame FRP Steel Plastic Grid Frame / Guard / Grates Road Safety Grating Cover Frame Support Frame Grate Protection Tree Prefabricated Used for decoration Cultivate the soil to care for watering easy. It also protects the car when running through. Very popular in Land Garden Scape. Tough tough Or used asaparking grid replacement block worm block paved road decoration lawn replacement concrete / Masonry Block Paving Unit
FRP / PP FRP / PP Tree Guard Grating Paver Frame CoverFRP / PP / Ductile Iron / Composite Big Tree Ring Guard Grating Frame, Tree Ring / Trees / Tree Grates / Trench Grating, FRP Tree Guard Frame, FRP Tree Guard Frame, FRP Mold Big Tree Guard Grating, Light weight and durable FRP material grating tree guard, Garden Decoration and Landscaping Exterior Grate products, Tree root trunk guard guard grating, Tree pit road safety grating cover, Tree Grating Paver Suspension Support Material, Pedestrian Safe Tree Grates and Trench Grates, Linear Paving sidewalk trench grate support, Perforated pavement around tree bollards
How can you decorate your tree after pour concrete floor? We haveabetter choice to protect and harmonize your tree and floor. With easy assembly and dismantle, FRP Big tree grating designed for tree base decoration effectively.
Type-1: PP (PolyProPylene) Tree Guard Grating Paver Frame Cover
ออกแบบให้เป็นทั้งแผ่นรองปลูกหญ้าและเป็นบล็อกปูพื้นที่แข็งแรง สำหรับลานจอดรถ ทางเดินในสนามกอล์ฟ พื้นที่ลานรถวิ่งผ่านในสวนสาธารณะ และบ้านพักอาศัย Designed as both pad grass andastrong block cradle. For parking lot Golf course The parking area runs through the park. And home
How to cushion the base of the tree. Easy to use standard size 35x35cm or9sheets per square meter. Each leaf can be put together likeaLego, with the middle hole for planting trees.
Type-2: FRP FibreGlass of Tree Guard Grating Paver Frame Cover Frame
1. Standard size: 100 x 1200 mm. 30mm thick. Tree Hole: 65 cm. Size 1.2×1.2 meters, thickness 30 mm, the width of the tree is 65 cm.
2. Including 4pcs / Set: A classic four-piece set with an interior radiating rectangular pattern, trimmed with an interlacing woven frame. set includes4chips, nut
3. Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Material frame grille protects the tree trunk FRP material is the newest innovation designed to replace stainless steel / aluminum. Aluminum / wood / steel Lifetime warranty for more than 100 years.
4. Premium World Class Quality Material: Imported from Europe, Grade A material exported to America, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia. Light weight with high strength: และมีน้ำหนักเบากว่าทุกวัสดุ
6. Chemical & High Temperature resistance It is heat-insulating and chemical resistant. UV protection is not crisp, cracking like plastic. Or other strong chemicals withstand sun,anew material to replace stainless steel fine
7. No recovery value: solve the theft because FRP materials used to produce fusion was not possible. Not wanted in the market to buy antiques.
8. Five year warranty on materials:5years product warranty.
Type-3: Cutting FRP FibreGlass of Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate Frame around the base of the tree.
The latest technology of Tree Guard Grating Paver Frame Cover Frame grate around the tree. Made to cut all sizes (Tailor Made) immediately within 2-3 days, lightweight, not corrosive weather throughout the life of the installation, easy to open the lid easy maintenance. Designed to replace the old cast iron grate.
This product can be colored, installation, maintenance, identification of convenience, since there is no recycling value, completely solved the problem of anti-theft. In the future cast manhole cover will be replaced by composite material manhole cover,ahuge potential market, the synthesis of inorganic composite manhole cover. Our tree guard of modern, simple and beautiful, high fracture strength. Cement and cast iron covers are cut several times, good drainage, so that the grass at the end of the tree can be fully exposed to the air and sunlight. Hot-dip zinc surface can beapermanent anti-corrosion. Designed to withstand the erection and removal of device. Widely used for municipal roads, gardens, squares, and other commercial and residential communities.
Spreading majestically alongacity boulevard or creating an oasis of shaded tranquility inaresidential courtyard, trees bringabeauty to any urban setting. Our tree grates protect and enhance that beauty, with designs that range from the elegantly simple to the impressively elaborate. Each is patterned and finished to complement virtually any architectural setting, giving protection to the root ball and root system, while providing for easy watering and drainage. Custom products available, all tree grates made of Fiberglass (FRP) and Ductile Iron.Design and Idea of Tree Guard Grating Paver Frame Cover frame grille protects the base of the tree
Spreading majestically alongacity boulevard or creating an oasis of shaded tranquility inaresidential courtyard, trees bringabeauty to any urban setting. Our tree grates protect and enhance that. Each is patterned and finished to complement virtually any architectural setting, giving protection to the root ball and root system, while providing for easy watering and drainage. Tree Grates made of Fiberglass (FRP) and Ductile Iron.
Materiales Of Tree, Grate the, Paver Products: Tree grates,, Trench grates,,, drain, grates, And, bollardsAre Available In:
1. the PP Tree, Grating:: Standard Material With High Quality, Join Connection Design For Any Size As Wish made of plastic PP (Polypropylene. ) Hasahard surface to scratch. Stiff, not deformed easily. It isavery good electrical insulator. Patented unique patented Chanel design. Strong and versatile for use in flooring. Walkway plate on the fish pond. Drainage duct cover around house, apartment, school, factory, swimming pool
2. Cast ductile iron: Ductile iron is more malleable and less brittle than gray iron to allow for greater strength to weight ratio. Metal still meeting LEED standard for recycled content
3. FRP Fiberglass: Lightweight, yet still strong, does not rust. Chemical & High Temperature resistance: Excellent heat and chemical resistance. UV protection is not crispy and fragile. Hand Plastic or other materials resistant to sun, chemical resistant to new materials to replace the good steel.
Excellent quality of FRP Specification
1) Light weight with high strength: Light weight, easy to maintain,
2) Corrosion and Rust resistance
3) Chemical & High Temperature resistance: Isadielectric insulation And chemicals, UV resistant, not brittle like the plastic or other materials chosen
4) No recovery value: Grand theft problem because FRP materials used to produce the fusion device is not stump. In the market of antiques.
Plaques Natural stone flooring, laterite, wood, artificial flooring, pedestals, plaster, bare mortar, patterns on garden paths, overflowing garden ponds.
Tree decorating ideas with “Tree Grating Guards” frame grate around the tree. Protect and decorate
Get to know the “Tree Grating” grate frame around the tree. It is decorated around the base of the tree and is important to help nourish the tree. Soaking, tilling, watering, easy to trowel. It also protects the root and stem from being affected. For example,apedal fromamotorcyclist is hard to get. The car is parked in the car.
Use “Tree Grating” grate frame around the base of the tree. It is alsoatechnique to add green space likeatree to the design. The courtyard is mortar. And want to plantatree Very popular in Land Garden Scape. Grate frame around the base of the tree. Both jigsaw and finished. Or used asaparking grate. To design
Trees and pedestrians alike requireacertain measure of protection from each other and other elements of urban life. While our tree grates possessadecorative flavor and the ability to complement the surroundings, more importantly they provide protection and security to the tree, as well as providingasafe extension of the pedestrian walk way.
Tree Grating Gray
cast iron cast iron Gray cast iron tree grates (and frames) shall be manufactured by Barry Pattern and Foundry (Barry-Craft), Birmingham, Alabama. Gray cast iron used in the manufacture of tree grates (and frames) shall conform to ASTM A48-83, class 30. All castings shall be of uniform quality, free from blow holes, shrinkage defects, swells, cracks or other defects. Casting will be free of fins, burrs and slag.
Cast Barry Pattern, Foundry (Barry-Craft), Birmingham, Alabama. Cast aluminum used in the manufacture of tree grates (and frames) shall be alloy 319 meeting Federal Specifications QQ-A-601 and ASTM B-26. All castings shall be of uniform quality, free from blow holes, shrinkage defects, swells, cracks or other defects. Castings will be free of fins, burrs and slag. Cast aluminum will beanatural sand-cast finish.
Foundry manufactures beautiful cast iron tree grates and guardsinavariety of sizes and shapes. Protect your trees and addatouch of class and sophistication to your landscaping project – many of our designs even allow for the inclusion of your city, neighborhood or company logo. Neenah Foundry isamanufacture ofaline of tree grates or guards that meet your exacting specifications.
Jonite tree grates effortlessly integrates into the cityscape, providing space for trees to grow and develop. Our tree gratings are certified ADA compliant and wheelchair friendly. This makes our tree grates popular in hospitals, clinics and residential areas. tree grates allow fully customizable light ports or sockets for the installation of different types of lightings foranight illumination which adds an exciting dimension to the natural beauty of the trees. With tree gratings, you can easily embossacorporate insignia or municipal logo right onto the tree grates in your environment, giving an exclusive identity to the locale. Beyond beautify and high-quality products, we believe in sustainable development. Essentially sustainable development is one that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. We aim to preserve the environment by incorporating at least 30% recycled content into our products. Through the use of our gratings, carbon emissions will also be lowered. We are your partner in green and sustainable design.
Walking along the streets, parks, gardens and along the pedestrian traffic, you will seeatree grate surrounding the trunk ofatree. These grates are act asaprotective barrier for tree roots and trunks. Not only for grates add protection, but they will extend the life of the tree. This is crucial for builders, councils and landscapers in their craft, and as we are able to produce any tree grate designs, (and of course they can be constructed to cater for metal tree guards) they look great! Paige Stainless has designedadual technology that will protect and extendatree’s pit life. As well as providing important drainage needed for the trees and surrounding landscapes. Steel mesh drainage grating prevents flooding and other contamination from the landscape. The drainage grating coupled with our stainless steel grates for added endurance and aesthetic appeal. These products give the landscape an added layer or protection and appeal. Both products can customize to any dimension given as well as shape or curvature. With the population on the rise, the need for tree grates in high pedestrian traffic has increased as well. Our tree grates are made to protect the landscape against high traffic areas with metal plates made of stainless steel. Not the higher maintenance products that are made in aluminum or rusting cast iron. This metal is placed around the tree base above the root zone or the excavated region. This helps to keep healthy growth. Moreover, the grills keep trash and general waste from falling through the polluting soil.
Tree grates are ideal for integrating trees into hardened landscapes minimizing the risk to pedestrians from open and uneven soiled areas, while protecting the tree and limiting the build up of debris at the tree base, as well as suppressing the growth of weeds. Grating Tree grates are designed to allow for tree growth, witharing design that allows the inner rings to be removed as the trunk grows. Tree grates are available inavariety of sizes and styles. We also havearange of higher strength ductile iron product available. Call us for details on size and pricing. All sizes are available withaGalvanized Angle Iron Frame.
Decorative tree grates areaperfect blend of form and function.Available in many styles and designs, they promote healthier trees by offering air and rainwater to the roots, while providingapedestrian-friendly flat surface with the Americans with Disabilities Act (ADA). Tree grates blend artistic form with function to protect tree roots, manage stormwater and maintain neat, orderly and safe sidewalks. Protect your investment in green infrastructure and maximize the benefits to your community by promoting healthy growth and longevity. Cast-iron tree grates are made to last and adapt to your trees as they grow. Choose correct size tree grate and removable center so your trees can reach their full potential.
ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Guard Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນ
FRP Steel ທາດເຫຼັກ Plastic Big Tree Ring / Guard / Grates ຂຸມຖະຫນົນຄວາມປອດໄພ Grating ປົກ Support ກອບ ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ພ້ອມ.
ໃຊ້ສໍາລັບການຕົບແຕ່ງ ປູກຝຸ່ນເພື່ອຮັກສານ້ໍາງ່າຍ. ມັນຍັງປົກປ້ອງລົດໃນເວລາທີ່ແລ່ນຜ່ານ. ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Land Garden Scape. Tough tough ການທົດແທນການປ່ຽນແປງຄອນກີດທົດແທນການປ່ຽນແປງຂອງຄອນກີດຄອນກີດການປ່ຽນແປງຄອນກີດທົດແທນຄອນກີດ / ໂຄງປະກອບການກ້ອນຫີນ
ຂອບຂອບ FRP / PP FRP / PP ປົກຄຸມຂອບກາວຝາຄອບ
FRP / PP / Ductile Iron / Composite Big Tree Ring Guard Grating Frame, Tree Ring / Trees / Tree Grates / Trench Grating, FRP Tree Guard Frame, FRP Tree Guard Frame, FRP Mold Big Tree Guard Grating, Lightweight ແລະທົນທານ Grating, Grating, Grid, Grid, Trench Grates, Linear Grating Paving sidewalk trench beam support, Perforated pavement around bollards tree ທ່ານສາມາດ decorate ຕົ້ນໄມ້ຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານງາມຊັ້ນຊີມັງ? ພວກເຮົາມີທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າເພື່ອປົກປ້ອງແລະປັບປຸງຕົ້ນໄມ້ແລະພື້ນເຮືອນຂອງທ່ານ. ດ້ວຍການປະກອບແລະການຍ່ອຍງ່າຍ, FRP ການຕິດຕັ້ງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ອອກແບບສໍາລັບການອອກແບບພື້ນຖານຕົ້ນໄມ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ປະເພດ -1: PP (PolyProPylene) ຂອບ Guard Grab ປົກຂອບກອບຂອບ ການອອກແບບທັງເປັນ pad ແລະຕັນຢ່າງແຂງແຮງ. ສໍາລັບບ່ອນຈອດລົດຫຼາຍ ສະຫນາມກອຟ ພື້ນທີ່ຈອດລົດແລ່ນຜ່ານສວນສາທາລະນະ. ແລະເຮືອນ ວິທີການປັກຈັບພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້. ງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ຂະຫນາດມາດຕະຖານ 35x35cm ຫຼື9ແຜ່ນຕໍ່ຕາລາງແມັດ. ເອກະສານແຕ່ລະຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການຮ່ວມກັນກັນຄື Lego, ມີຂຸມກາງສໍາລັບການປູກຕົ້ນໄມ້.
ປະເພດ 2: ການ FRP FIBERGLASS ການເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, Guard, Grating, ລົດປູຢາງກອບໄດ້ປີ້ງກອບປົກປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່
ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, Guard, Grating, pavers ໄດ້ກອບປົກຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ
1 .: Standard ຂະຫນາດຂອງ:.. 1200 x 1200 mm Breakthrough 30mm ຫນາເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, Hole ຕິດຕໍ່:. 65 Cm ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກປ້ອງຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ. .. ຂະຫນາດ 1.2×1.2 ແມັດທີ່ມີຄວາມຫນາຂອງ 30 ມມໄດ້ເປີດຕົ້ນໄມ້ຄອບຄົວຂອງ 65 ຊຕມ
2 ລວມ4ຊິ້ນ / ທີ່ກໍານົດໄວ້: ຕັ້ງຄ່າເປັນຄລາສສິກ Four Pieces ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນທີ່ແຜ່ອອກໃນການອອກແບບທີ່ມີຜົນຜະລິດຮູບແບບ Rectangular, Trimmed ມີ interlacing ສໍາລັບ Woven ກອບ tomb ໄດ້.. ທີ່ກໍານົດໄວ້ປະກອບດ້ວຍ4chip, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ
3. ປີ້ງ Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) ກອບການວັດສະດຸປົກປ້ອງອຸປະກອນການ FRP ຕົ້ນໄມ້ລໍາຕົ້ນແມ່ນການປະດິດສ້າງ
4. ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງໂລກທີ່ດີທີ່ສຸດ: ນໍາເຂົ້າຈາກເອີຣົບ, ວັດຖຸດິບຊັ້ນ A ທີ່ສົ່ງກັບອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫລີໃຕ້, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ. ນ້ໍາຫນັກເບົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ: และมีน้ำหนักเบากว่าทุกวัสดุ
6. Chemical & High Temperature resistance ມັນເປັນອຸນຫະພູມທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນແລະທົນທານຕໍ່ສານເຄມີທີ່ທົນທານຕໍ່ UV, ບໍ່ຂັດ, ແຕກຄ້າຍຄືຢາງ.
8. ການຮັບປະກັນຫ້າປີກ່ຽວກັບອຸປະກອນ: ການຮັບປະກັນ5ປີຕໍ່ອຸປະກອນ. ໃຫມ່ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອທົດແທນການສະແຕນເລດ / ອາລູມິນຽມ. ອະລູມິນຽມ / ໄມ້ / ເຫຼັກ
ການຮັບປະກັນຕະຫຼອດຊີວິດໃນໄລຍະ 100 ປີ.
3 ປະເພດ: ການຕັດການ FRP FIBERGLASS ການເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, Guard, ກອບ Grating ໄດ້, ລົດປູຢາງປີ້ງກອບປົກປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ. ເຕັກໂນໂລຊີຫລ້າສຸດຂອງຂອບ Tree Guard Grating Paver Frame ກອບກວມເອົາຂອບໃຈປົກປ້ອງຕົ້ນໄມ້. ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອທົດແທນເຕົາເຫລໍກເກົ່າ.
ການອອກແບບແລະແນວຄວາມຄິດຂອງເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Guard Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນ ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ ກະຈາຍສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຕາມຖະຫນົນຫລວງນະຄອນຫລືສ້າງ oasis ຂອງ tranquility ບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມໃນ courtyard ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຄວາມງາມກັບຕົວເມືອງໃດຫນຶ່ງ. ແກງຕົ້ນໄມ້ຂອງພວກເຮົາປົກປັກຮັກສາແລະເສີມຂະຫຍາຍທີ່. ຄວາມງາມດ້ວຍການອອກແບບທີ່ໄດ້ສະຈາກການ ງ່າຍດາຍ elegantly ກັບທີ່ລະອຽດປະທັບໃຈ. ແຕ່ລະຄົນແມ່ນມີລວດລາຍແລະສໍາເລັດເພື່ອໃຫ້ສົມບູນ virtually ການຕັ້ງຄ່າສະຖາປັດຕະໃດ, ໃຫ້ການປ້ອງກັນການບານຮາກແລະຮາກລະບົບ, ໃນຂະນະທີ່ການສະຫນອງສໍາລັບນ້ໍາງ່າຍແລະການລະບາຍ. ຜະລິດຕະພັນການລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້, ທັງຫມົດ. Grates ຕົ້ນໄມ້ເຮັດດ້ວຍເຟືອງແກມັຟ (FRP) ແລະທາດເຫຼັກ Ductile.
ຕາຕະລາງຕົ້ນໄມ້ຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບໂດຍປົກກະຕິກັບການວັດແທກຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ. ຕາຕະລາງຕົ້ນໄມ້ຄວນຖືກສັ່ງໃຫ້ມີການເປີດຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ໄມ້ທ່ອນໄມ້ແຕ່ລະຄົນຈະມີໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະຫນາດມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່. ມັນຄວນຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຂະຫຍາຍການເປີດຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌, ຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດຖືກຕັດອອກໄປຕາມມາດຕະຖານ. ການເປີດກວ້າງການເປີດກວ້າງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍຂື້ນຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີເພື່ອຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງຕົ້ນໄມ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດທົ່ງຫຍ້າໃນຕົວເມືອງ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ພື້ນທີ່ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການຈະລາຈອນແກ່ຜູ້ໂດຍສານໃນພື້ນທີ່ປູກ. ພວກເຂົາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄວບຄຸມຫຍ້າແລະຂີ້ເຫຍື້ອໃນພື້ນທີ່ປູກ. GRATINGTHAI ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະຫນາດ, ຮູບ, ຄໍເຕົ້າໄຂ່ທີ່ແລະປະເພດວັດຖຸຕ່າງໆ. GRATINGTHAI? ແກ່ນຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ບໍລິການການເຮັດວຽກຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພື້ນທີ່ປູກຝັງໃຫ້ກວມເອົາພື້ນທີ່ປູກ.
ວັດຖຸການເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຜະລິດພັນ Paver: ແກງເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ,, ແກງນ້ໍ ,,, ເດັກ, ແກງ, ແລະ, bollards ມີຢູ່ໃນ:
1. ການເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ PP, Grating :: ວັດສະດຸມາດຕະຖານມີຄຸນະພາບສູງ, ເຂົ້າຮ່ວມການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບຂະຫນາດໃດໃນຖານະຊີເຮັດຈາກ PP ຢາງ (Polypropylene. ) ມີຫນ້າດິນແຂງໃນການແກະສະຫຼັກ. ແຂງ, ບໍ່ຜິດປົກກະຕິ. ມັນເປັນ insulator ໄຟຟ້າດີຫຼາຍ. ການອອກແບບ Chanel ທີ່ມີສິດທິບັດທີ່ບໍ່ມີສິດທິບັດ. ແຂໍງແຮງແລະມີປະໂຍດສໍາຫລັບໃຊ້ໃນພື້ນເຮືອນ ແຜ່ນດິນໃນຫນອງປາ. ກວາດທໍ່ນ້ໍາປະມານບ້ານ, ອາພາດເມັນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ, ສະລອຍນ້ໍາຮອບ
2. ທາດເຫຼັກເຄືອບທາດເຫຼັກ: ທາດເຫຼັກທາດເຫຼັກແມ່ນຫຼາຍ malleable ແລະກ້ຽງຫນ້ອຍກ່ວາທາດເຫຼັກສີຂີ້ເຖົ່າເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກັບອັດຕາສ່ວນ້ໍາຫນັກ. ໂລຫະຍັງກອງປະຊຸມໄດ້ LEED Standard ສໍາລັບສະນຸກເກີແມ່ນເອົາມາໃຊ້ຄືນເນື້ອຫາແບບພິເສດ
3. FRP, Fiberglass: ແບບສີຂອງການອອກແບບ, ແສງສະຫວ່າງນ້ໍາຫນັກຍັງເຮັດຍັງແຂງແຮງ, ບໍ່ rust ເປັນເອກະລັກໃນເວລາທີ່ປະໄວ້ທໍາອິດຍັງບໍ່ແລ້ວແມ່ນ corrosion ແລະ rust, ການຕໍ່ຕ້ານ:.. corrode ທີ່ບໍ່ແມ່ນ perishable ຫຼື rust ຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັນກັບ. ສານເຄມີແລະອຸນຫະພູມສູງອຸນຫະພູມ: ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນແລະສານເຄມີສູງ. ການປົກປ້ອງ UV ແມ່ນບໍ່ຂັດແລະອ່ອນເພຍ. ມື ອຸປະກອນການສຕິກຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆ, ທົນທານຕໍ່ກັບແສງແດດ, ສານເຄມີທົນທານກັບວັດສະດຸໃຫມ່ເພື່ອທົດແທນການເຫຼັກທີ່ດີ.
A ຄຸນນະສົມບັດທີ່ປະເສີດຂອງ fiberglass (ທີ່ FRP ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະການ)
1) Light, ນ້ໍາຫນັກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ: Lightweight ຕິດຕັ້ງ, ງ່າຍທີ່ຈະຮັກສາ
2) Corrosion ແລະ Rust ການຕໍ່ຕ້ານ: corrode ທີ່ບໍ່ແມ່ນ perishable ຫຼື rust
3) Chemical & ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງສຸດ: . Is an insulation dielectric ໃນຕະຫຼາດວັດຖຸບູຮານ.
Plaque ພື້ນເຮືອນແກນທໍາມະຊາດ, ດ້ານຫຼັງ, ໄມ້, ພື້ນເຮືອນ, ປອມ, stucco, mortar ເປົ່າ, ຮູບແບບກ່ຽວກັບ walkway ສວນ, ຫນອງ overflow, ການເຮັດສວນ
ແນວຄວາມຄິດຂອງການຕົກແຕ່ງຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີ “ໄມ້ແກະສະຫຼັກໄມ້” ກອບຂອບຮອບຕົ້ນໄມ້. ປົກປັກຮັກສາແລະ decorate ຮູ້ສຶກວ່າ “Tree Grating” ກອບກໍາແພງທີ່ອ້ອມຮອບຕົ້ນໄມ້. ມັນໄດ້ຖືກ decorated ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຕົ້ນໄມ້ແລະສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຕົ້ນໄມ້. ການດູດຊຶມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ນ້ໍາ, ງ່າຍທີ່ຈະລາກ. ມັນຍັງປົກປ້ອງຮາກແລະລໍາຕົ້ນຈາກການຖືກທໍາລາຍ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ pedal ຈາກ motorcyclist ແມ່ນຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ລົດແມ່ນ parked ໃນລົດ.
ນໍາໃຊ້ “Tree Grating” ກອບກໍາແພງອ້ອມຂ້າງຂອງຖານຂອງຕົ້ນໄມ້. ມັນຍັງເປັນວິທີການຕື່ມພື້ນທີ່ສີຂຽວຄືຕົ້ນໄມ້ເພື່ອການອອກແບບ. courtyard ແມ່ນ mortar. ແລະຕ້ອງການປູກຕົ້ນໄມ້ ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Land Garden Scape. ກອບຂອບສຸດພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ. ຫຼືນໍາໃຊ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກບ່ອນຈອດລົດ. ການອອກແບບ
ຕົ້ນໄມ້ແລະຄົນຍ່າງຕີນຕ້ອງມີມາດຕະການປົກປັກຮັກສາຈາກແຕ່ລະອັນອື່ນແລະອົງປະກອບອື່ນໆຂອງຊີວິດໃນຕົວເມືອງ. ໃນຂະນະທີ່ຕະແກງຕົ້ນໄມ້ຂອງພວກເຮົາມີລົດຊາດອອກແບບ ແລະຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ສົມບູນເປັນສະພາບແວດລ້ອມພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍພວກເຂົາໃຫ້ການປ້ອງກັນແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຈະເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະຫນອງການຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພຂອງວິທີການຍ່າງຕີນຍ່າງ.
ການຮູ້ບຸນຄຸນເທົາສາມາດຜະລິດ Cast ພ້ອມສໍາລັບທາດເຫຼັກເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ,
ສີຂີ້ເຖົ່າສາມາດຜະລິດທາດເຫຼັກມາດຕະຖານ, ຕະແກງສຽງໂຫວດທັງຫມົດ, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ (ແລະກອບ) ໃນຖານະເປັນຈະໄດ້ຮັບການອຸດສາຫະກໍາໂດຍໂດຍ Barry, Pattern ຫລອມ, ແລະ (ໂດຍ Barry, ຫັດຖະກໍາ,), ເບີມິງແຮມນີ້, ອະລາບາມາ. ສີເທົາເຫລໍກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງ ແກງຕົ້ນໄມ້ (ແລະເຟຣມ) ຈະສອດຄ່ອງກັບ ASTM A48-83, ລະດັບ 30. ຫລໍ່ທັງຫມົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບເປັນເອກະພາບ, ບໍ່ມີຂຸມລະເບີດ, ຂໍ້ບົກພ່ອງຫົດຕົວ, ມີອາການບວມ, ຮອຍແຕກຫລືຂໍ້ບົກພ່ອງອື່ນໆ. ການສະເຫລີມສະຫລອງຈະບໍ່ມີເປືອກ, burrs ແລະ slag.
ຕົ້ນກໍາເນີດ Grating Cast Aluminum Cast Aluminium Tree
Grates (Barry-Craft), ເບີມິງແຮມ, Alabama. ອາລູມິນຽມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງຕາຕະລາງຕົ້ນໄມ້ (ແລະຂອບ) ຈະເປັນໂລຫະປະສົມ 319 ຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະບານກາງ QQ-A-601 ແລະ ASTM B-26. ການໂຍນທັງຫມົດຈະຕ້ອງມີຄຸນນະພາບຢ່າງດຽວ, ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກຫລຸມຫລຸມ, ຄວາມບົກພ່ອງຂອງການຫົດຕົວ, ການຮຸ່ງເຮືອງ, ການຮອຍແຕກຫລືຄວາມບົກພ່ອງອື່ນ. ການຫລໍ່ລວງຈະບໍ່ມີປີກ, ກ້ອນແລະແກະ. ອາລູມິນ໌ທີ່ຖືກສະກັດຈະເປັນດິນຟ້າທີ່ມີນ້ໍາປະປາທໍາມະຊາດ. Foundry ຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຕົ້ນໄມ້ທາດເຫຼັກງາມແລະກອງ
ໃນຫຼາຍຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງ. ປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຂອງທ່ານແລະເພີ່ມການສໍາພັດຂອງຫ້ອງຮຽນແລະຄວາມທັນສະໄຫມກັບໂຄງການທັດສະນະຂອງທ່ານ – ຫຼາຍອອກແບບຂອງພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການລວມຕົວເມືອງ, ບ້ານຂອງທ່ານຫຼືບໍລິສັດຂອງທ່ານ. Neenah Foundry ແມ່ນການຜະລິດຂອງເສັ້ນຂອບຂອງຕົ້ນໄມ້ຫຼືກອງທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງທ່ານ.
ຕົ້ນໄມ້ Jonite grates ງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນເມືອງ, ສະຫນອງພື້ນທີ່ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວແລະການພັດທະນາ. ຂອບແກ້ວຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າ ADA ສອດຄ່ອງແລະເປັນມິດກັບຄົນຂັບລົດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມນິຍົມໃນໂຮງຫມໍ, ຄລີນິກແລະເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ. ໄມ້ແກະສະຫຼັກຕົ້ນໄມ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຢ່າງເຕັມທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ຫຼືມີຊ່ອງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງປະເພດຕ່າງໆຂອງແສງສໍາລັບການສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນເຊິ່ງເພີ່ມຂີດຄວາມຫນ້າສົນໃຈກັບຄວາມງາມທໍາມະຊາດຂອງຕົ້ນໄມ້. ທ່ານສາມາດເອົາໃຈໃສ່ບັນດາສັນຍາລັກຂອງບໍລິສັດຫຼືສັນຍາລັກທາງເທດສະບານທີ່ເຫມາະສົມກັບຕາຕະລາງຕົ້ນໄມ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເປັນເອກະລັກສະເພາະກັບທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກສວຍງາມແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພວກເຮົາເຊື່ອໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໂດຍພື້ນຖານແມ່ນຫນຶ່ງໃນທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຈຸບັນໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃນອະນາຄົດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໂດຍນໍາໃຊ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 30% ເນື້ອໃນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ທໍ່ຂອງພວກເຮົາ, ການປ່ອຍອາຍຄາບອນຈະຖືກຫຼຸດລົງ. ພວກເຮົາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານໃນການອອກແບບສີຂຽວແລະຍືນຍົງ.
ຍ່າງຕາມຖະຫນົນ, ສວນສາທາລະນະ, ສວນແລະຕາມການຈາລະຈອນ, ທ່ານຈະເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕັມໄປອ້ອມຮອບລໍາຕົ້ນຂອງຕົ້ນໄມ້. ຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດເປັນອຸປະສັກປ້ອງກັນສໍາລັບຮາກຕົ້ນໄມ້ແລະລໍາຕົ້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບ grates ເພີ່ມການປົກປ້ອງ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງຕົ້ນໄມ້. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງ, ຄະນະກໍາມະແລະ landscapers ໃນ craft ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະດັ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດການອອກແບບເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຄວາມກະຕັນຍູໃດ, (ແລະແນ່ນອນພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບກອງຕົ້ນໄມ້ໂລຫະ) ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່! Paige Stainless ໄດ້ອອກແບບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສອງເຊິ່ງຈະປົກປ້ອງແລະຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງແມງໄມ້. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໃຫ້ການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ແລະພູມສັນຖານອ້ອມຂ້າງ. ຕາຂ່າຍເຫລໍກສະແຕນເລດປ້ອງກັນການລະບາດແລະການປົນເປື້ອນອື່ນໆຈາກພູມສັນຖານ. ລະບົບລະບາຍນ້ໍາປະສົມກັບແກນສະແຕນເລດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມອົດທົນເພີ່ມເຕີມແລະການອຸທອນທີ່ສວຍງາມ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ພູມສັນຖານເພີ່ມຊັ້ນຫຼືການປ້ອງກັນແລະການອຸທອນ. ຜະລິດຕະພັນທັງສອງສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ມິຕິໃດກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບຮ່າງຫຼືກາບ. ມີປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຂຸດໄມ້ຕົ້ນໄມ້ໃນການຈະລາຈອນ pedestrian ສູງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ແກນຕົ້ນໄມ້ຂອງພວກເຮົາຖືກປົກປ້ອງເພື່ອປົກປ້ອງພູມສັນຖານທີ່ມີພື້ນທີ່ສູງທີ່ມີທ່ອນໂລຫະເຮັດຈາກເຫຼັກແຕນເລດ. ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍອະລູມິນຽມຫຼືທາດເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫັບ. ໂລຫະນີ້ແມ່ນຖືກວາງຢູ່ທົ່ວຕົ້ນໄມ້ພື້ນຖານຂ້າງເທິງເຂດຮາກຫຼືພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ. ນີ້ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງແລະສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕົາໄຟຍັງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປຈາກການຫຼຸດລົງຈາກດິນທີ່ເປັນມົນລະພິດ.
ບູລະນາການເຂົ້າໄປໃນຕົ້ນໄມ້ມີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບແກງ, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ເປັນພູມສັນຖານແກ່ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການໄປເປີດແລະພື້ນທີ່ Uneven ດິນ, pedestrians, ມັນເຫັນໃນຂະນະທີ່ການປົກປ້ອງເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນແລະຕຶກສະພາໄດ້ເຖິງຈໍາກັດ debris ໃນການເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂອງຖານທີ່, ເປັນທີ່ Suppresing ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ. ແກງເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນການຮູ້ບຸນຄຸນແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຕົ້ນໄມ້, ມີການອອກແບບວົງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວົງໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກເປັນລໍາຕົ້ນຈະເລີນເຕີບໂຕ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍຂະຫນາດແລະຮູບແບບຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຍັງມີຜະລິດຕະພັນເຫລໍກທີ່ມີຄວາມແຂໍງແຮງສູງ. ໂທຫາພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະຫນາດແລະລາຄາ. ຂະຫນາດທັງຫມົດມີຢູ່ກັບກອບເຫລໍກມຸມ Galvanized grates ຕົ້ນໄມ້ອອກແບບເປັນການຜະສົມຜະສານທີ່ສົມບູນແບບຂອງແບບຟອມແລະຫນ້າທີ່.
ມີຫລາຍຮູບແບບແລະການອອກແບບ, ພວກເຂົາສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງຕົ້ນໄມ້ໂດຍສະເຫນີອາກາດແລະຝົນເພື່ອຮາກ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມດໍາລົງຊີວິດທີ່ສະດວກສໍາລັບນັກເດີນທາງທີ່ມີຊາວອະເມລິກັນທີ່ມີຄວາມພິການ (ADA). ແກ່ນຕົ້ນໄມ້ປະກອບແບບຟອມສິລະປະທີ່ມີຫນ້າທີ່ປົກປ້ອງຮາກຕົ້ນໄມ້, ຈັດການນ້ໍາຖ້ວມແລະຮັກສາເສັ້ນທາງທີ່ສະອາດ, ປອດໄພແລະປອດໄພ. ປົກປັກຮັກສາການລົງທຶນຂອງທ່ານໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງສີຂຽວແລະເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານໂດຍການສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ແລະສຸຂະອະນາໄມ. ຂີ້ເຫຍື້ອຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີທາດເຫຼັກແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍາວແລະປັບຕົວກັບຕົ້ນໄມ້ຂອງທ່ານເມື່ອພວກມັນເຕີບໂຕ. ເລືອກເອົາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມແລະສາມາດເອົາອອກໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຂອງທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມສາມາດອັນເຕັມທີ່ຂອງມັນ. ຮູບແບບຂອງຜູ້ອອກແບບຫລາກຫລາຍຮູບແບບທີ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ສູນກາງທີ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້
14. HDG Steel ຮູ້ບຸນຄຸນລັອກຄລິບ clamp ກູລັອກຄລິບແຜງແນ່ນອນດ້ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຊັ້ນ walkway Mat, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating, #Anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, # ລັກສະນະ. ອຸປະກອນລັອກຄລິບຍຶດແຜ່ນ sieve, #Curbed ບາຍນ້ໍາ grating Scupper, ຈັ່ນຈັບ # sieve ໃບຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການ sidewalk ຂ້າງຂ້າງການຄວບຄຸມໄດ້, #Egg Crate, # ອອກຕັນຫນ້າກາກຫນ້າຈໍກະດານ, #FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນກວມເອົາ Protector #FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ. gritted ແຜ່ນແຜ່ນ # ອັດດັງແລະມຸມ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ.
ບາຍນ້ໍາ grating ຢາງ prefabricated ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ, ອະລູມີນຽມ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ໃຍແກ້ວ, ກວມເອົາຂຸມ cast iron sewers ການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາເລັດ, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, sieve overflow ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ນ້ໍາຂັງ Overflow Drain Grilles, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ແກນ, # ຜະລິດຕະພັນແລະຂາຍຕ່ອງໂສ້ອ້ອມຮອບຕົ້ນໄມ້. ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ, louvers, blinds, grilles, grilles, ກອງແສງ / ອາກາດ / ventilators
GFRP Composite Steel Gully ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດຫນຽວ Iron Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, ລະນຶກແບບປຸແອອາລູມິນຽມການໄຫຼ, ຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal. , Carbon ເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍເຫຼັກບາ, Fastener Clip ລັອກ clamps Saddle ລັອກຂ້ອນຂ້າງຍາວເປັນຫມູ່ຄະນະເຫຼັກ, ປີ້ງ, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເດັກຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຊິນທໍ່ຝາເສັ້ນໃຍ, lid ອອກຜູ້ຊາຍ tank ຂຸມມື-Holstein ໄດ້. ຫມວກກັນກະທົບ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ຫມວກກັນກະທົບ, ຝາບັກ No ຂຸມມຸມສາກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced lid, ກວມເອົາແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາລະບົບການເກັບລວບລວມສິ່ງເສດເຫຼືອ; ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຂີ້ເຫຍື້ອສໍາເລັດຮູບ, ກອບຮຸ້ນປະມານ
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ rod ຍ້າຍ U ລະບາຍ ditch ຕາມຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ສາຍເຫຼັກ, tearing, ພັບຂຸມ jig, ເຫຼັກຂ້ອນຂ້າງຍາວ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, TROTTERS ໂຄງສ້າງ, ຕິດຕາມໄກ່ໄດ້. ການລະບາຍ, ຄວາມຜິດພາດພຽງຍ່າງ, ລາງລົດໄຟ, ສຸດທິ mini ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block paving, ພາຍນອກຫນອງ koi ຕົກແຕ່ງ, ຈັດສວນ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນ, ຍົກລະດັບອຸປະກອນ, ການຕິດຕັ້ງ DIY ງ່າຍ. ຕົວເອງ, ໄຟລອຍ, ໄຟຟ້າ, tbb , ກະເບື້ອງເພດານກ່ຽວກັບກໍາແພງຫີນເປັນ, ກໍາແພງຫີນຂອງ curtains gauzy ແສງສະຫວ່າງ opaque ໄດ້. ຮົ້ວຫມວດຫມູ່ຄະນະກໍາແພງ ຜົນປະໂຫຍດຕົກແຕ່ງເພດານເຮືອນຍອດ hinge slat ມ່ານ Fiat cedar breeze pergola, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffles ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. ດີໃຈຫລາຍ, polycarbonate, vinyl, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ເພດານຕົກແຕ່ງ, ລະບົບປັບອາກາດ, ຫ້ອງຫ້ອງ, ຄຸນະພາບສູງເກດ A Panels ຫນ້າຫວາດສຽວ, ກໍາແພງລະບາຍລົມໂຄງສ້າງເພດານທີ່ໂຈະ, Splashboard / Weatherboard / Slat slats / Trellis shade, ສີທົ່ວໄປຄີມກັນແດດ Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini ຕົກແຕ່ງ Grating Curtains, ການປົກຫຸ້ມຂອງປະຕິມາກໍາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ເປີດເພດານສັບມືຖືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ການເຮັດວຽກໃຫມ່, ການອອກແບບ, ໂລ້ເພດານ. ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ ໃບສະຫມັກຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກງານການຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ ໃບສະຫມັກຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກງານການຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ
ຊ່ຽວຊານ primer ຢາງ, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຄ້າທົດແທນແກ້ວອຸປະສັກຜ້າອັດດັງ, ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ພື້ນແຜ່ນ, walkways, pavement ຕີນ, ແລະສວນສາທາລະພະຍາດແລະອື່ນໆ. ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ອະລູມິນຽມ Composite, Composite, FRP, corrosion, rust, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟໄຫມ້, ອາຊິດ, ສານເຄມີ, ການປະຫຍັດພະລັງງານ. ປວກເຫັດ, ບໍ່ມັກອາການບວມ, ປອດສານພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ retardant ຂອງ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, ສາມາດພິເສດສະຫຍາມ SSG, ອາເມລິກາ, ອາເມລິກາ, ອາຊີປາຊີຟິກ, Fibergrate, Strongwell, Webforge, repairing ເຮືອນ, ຫນ້າ laminate. Epoxy, epoxy, epoxy, epoxy flooring, Polyurethane, PVC, ກາວ, Bio, Bio, PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກນ, PE ປັບປຸງຮ້ານອາຫານໂຮງງານຜະລິດຊັ້ນ, ເຮືອນຄົວໂຮງແຮມ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ອຸດສາຫະກໍາພື້ນ. ຊ່ອມຮອຍແຕກຊຶມ, ເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ອຸປະກອນທາງເລືອກ, ເຫຼັກ, ຫີນ, ໄມ້, ປອມ, ສັງເຄາະ, ຢາງ WPC, ຊີວະ. ອຸປະກອນເອົາມາໃຊ້ຄືນ, Fla Drain, ເດັກເທິງຫລັງຄາ, ພື້ນເຮືອນ, ໃສ່, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ປະມານການຮ້ອງຂໍ. ປັບປຸງ Feng Shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກຊັ້ນ, ປາດ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ຊອງບົກ, ຊັ້ນພື້ນດິນຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກຊັ້ນ, ປາດ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ຊອງບົກ, ຊັ້ນພື້ນດິນຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui
ຜະລິດຕະພັນ FRP, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite, ້ໍາຢາງ vinyl ester, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຖະຫນົນຫົນທາງຂຸມ sculpture ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນ. ຍ່າງຕາມຖະຫນົນຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍບາເກິດ gratings ປະກອບ Cage Ladders, treads Staircase, ບໍ່ຕ້ານ stairways ຄວາມຜິດພາດພຽງ skid, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, tread ການປົກຫຸ້ມຂອງ, Handrail, Structural ຮູບ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນ garage double ,. airsoft, ຕາຫນ່າງ, railing, ຍ່າງ, ຊັ້ນພື້ນຖານການລະເບີດ,ຄິດປະດິດສ້າງອຸປະກອນເສີມການອອກແບບໃຫມ່, ສ່ວນປະກອບ, ຖາປັດຕິຍະແລະອຸດສາຫະກໍາພື້ນລະບຽງ, ຍ່າງຕາມຂົວ System, ໃກ້ຈະເຂົ້າສູ່ courtyards dock, ຮົ້ວ, ທໍ່ກົມ, ແຜ່ນທໍ່, ມຸມ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຂຸມຫລຸມ, ການເຄືອບ, ສີມັງ, Polyurethane, ຂັດ, ປັບລະດັບ Epoxy ຕົນເອງ, ຊັ້ນ. ເສັ້ນ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ຊັ້ນແຂງ, Grouting, ກັນນ້ໍາ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ, tower Cooling ປຽກ, ຖັນ, overflow, Laminate, ໂລຫະ, ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, ຢາງ, acrylic, RGB, ABS, PS, PC ,. Hot Dip Electroforge Galvanized, Brass, Zinc, Supply, ອາຫານຊັ້ນຮຽນອາຫານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ຜະລິດ, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, InfosoftInfosoft
GFRP Composite Manhole Covers (grating cover tube ຊິນ fiber) www.chancon.co.th ຄວາມກະຕັນຍູ SOLUTIONS ອອກແບບແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ: ນອກຮອບ Manhole ປົກ, Square, ຮູບສີ່ແຈສາກ, Circle ວົງ, ປະດິດ Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell ເພດານຄວາມກະຕັນຍູ. , ຜ່ານວິທີການ Sidewalk Basement, paving ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຕິກ, ປະທັບຕາ Manhole, ມືຂຸມຍົກນັກກິລາຍົກ, ຈັບອ່າງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສນ້ໍບາຍນ້ໍາມືຖື, ຄວາມສະອາດອອກ, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຊັ້ນ Grates Drain ອາບນ້ໍາ, Sewer, ພາວະຖົດຖອຍແຜ່ນປິດທໍ່ອຸດຕັນ, ຫນຽວຫລໍ່ສີເທົາ Iron, ທົດແທນເລດ. ເຫຼັກ, ໄມ້ Lumber WPC ໄຟເບີຊີເມນ, Checkered ແຜ່ນ Duck, ອຸປະກອນ, ສຸຂາພິບານ, ຫ້ອງ hatch, ການໂຍກຍ້າຍ, block ຫນ່ວຍ masonry paving, ອາຫານສັ່ງຊື້, ເປີດຊ່ອງ, ເຮືອ, ລະບາຍອາກາດວາວ, ກອງ, ສະນຸກເກີ, pump ໍາປັ່ນປ່ຽນພື້ນທີ່ປົນເປື້ອນ, ການດໍາເນີນການ. , ກອບການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, Lattice, Rain Shooter Water,rack ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ, Egg Crate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, HVAC ອາກາດ vector ຄືນ acrylic / Double deflection Grid ອາກາດ.
CHANCON PROFILE / Shankon Shanon ຜະລິດ ຜູ້ຜະລິດພິເສດ. ລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ Paving slabs Step ladder ເກີບ Lightweight Lids wash ທໍ່ນັ້ນກວມເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ. ແຜ່ນເຫຼັກຊັ້ນໃນເດີ່ນຫຼາຍ Paving mat ລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາປະປາສ່ວນເທິງແມ່ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນເນື່ອງຈາກມີໂລຫະແລະສານເຄມີ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ຝາ ຄອບ Manhole
1 PolyPropylene (PP) Plastic GRATING PP plating grating ບັນດາກະແສການລະບາຍນ້ໍາຫນັກເບົາແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າຍ່າງກ່ວາເຫລໍກ. ເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ມີນ້ໍາ, ຮົ່ມ, ເຮັດສວນ, ຫນອງແກ້ວ, ຫນອງປາ, ຄອນໂດມິນຽມ
.ສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາສະລອຍນ້ໍາ ກ່ອງພາດສະຕິກ ABS ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານຂະຫນາດ 25cm ແລະ 30cm ມີສອງຊັ້ນທີ່ມີຄຸນະພາບທີ່ຈະເລືອກເອົານ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະຜ່ານຄົນ. ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລົ່ມ. ອ້ອມຂ້າງສະລອຍນ້ໍາ ພື້ນທີ່ໂດຍບໍ່ມີລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານທໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ.
3. Hotdip Galvanized (HDG) Iron Metal Steel Grating. ຮ້ອນຊ້ວນ galvanized ເຫລໍກຮ້ອນ galvanized ແຜ່ນເຫຼັກ. ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍລະບົບ CO2, ຫຸ່ນຍົນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກຫຼາຍກ່ວາການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍມືແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ HDG. ປະໂຫຍດແມ່ນວ່າມັນແຂງແຮງກວ່າວັດສະດຸທັງຫມົດ. ຂໍ້ເສຍປຽບແມ່ນການຂີ້ເຫຍື້ອ. ແລະໂອກາດແມ່ນ 25x100cm ແລະ 30x100cm
.FRP Fiberglass Grill / Mold ຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນເສັ້ນໃຍແກ້ວ, reinforced ຊິນ “ຊອນ FRP” ປີ້ງທົດແທນ, ສະແຕນເລດ / ອາລູມິນຽມ. ຜະລິດດ້ວຍເສັ້ນໃຍຢາງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ທົນທານຕໍ່ UV, ແສງແດດບໍ່ແຕກ, ກາວຫຼືອາກາດ. Thief ບໍ່ຕ້ອງການ ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍດາຍ ຊີວິດຂອງ 50-100 ປີແມ່ນເປັນເອກະສານທາງເລືອກໃຫມ່. ເລືອກສີທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ 1.5x4M ສໍາລັບພື້ນເຮືອນ. Designed for use as ໃສ່ກັບດັກຂີ້ເຫຍື້ອ, ຕົວແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ, ດັກໃບ, ແກນຂ້າງຕາມເສັ້ນທາງທາງຫລວງ. ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ຖະຫນົນຊົນນະບົດແລະບາງກອກ 6.
Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover ຜະລິດຈາກ Ductile Cast Iron, ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ EN124, ທົດສອບໂດຍສະຖາບັນ TAFE ໄທ. ເລືອກຈາກຊັ້ນຮຽນຈໍານວນຫຼາຍຈາກ 2-40 ໂຕນ, ທັງສອງມີ hinges ແລະ lock ຕ້ານລັກ. ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາລາຄາຂາຍແມ່ນ 1 ຊຸດ, ລວມທັງການປົກຫຸ້ມດ້ວຍກອບ.
7 FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete frame with frame. ຜະລິດຈາກວັດສະດຸ FRP reinforced fiber reinforced, EN124 ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນທາດເຫລໍກທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ເລືອກຈາກ 2-40 ໂຕນ, ງາມກັບທໍາມະຊາດ. ບໍ່ນິຍົມໃນຕະຫຼາດເພື່ອຊື້ວັດຖຸໂບຫານທີ່ຖືກຂະໂມຍບໍ່ມີ
8 Egg ນີ້ Crate ກະຈັງກະຈາຍ, ຕູ້ປາ Divider, Panel ເຮັດໃຫ້ມີແສງໄດ້, grating ແຍກໃນປ່ອງແສງສະຫວ່າງການປົກຫຸ້ມຂອງໄຟ. ງາມຕູ້ປາການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບຝາຄອບຂອງຝາອັດປາກມົດອາກາດ ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນອອກແບບສໍາລັບປາງາມ. ຝາຜະຫນັງຊິ້ນສ່ວນ, ນ້ໍາ, ຕູ້ປາ, ກຸ້ງ, ກຸ້ງ, ເກືອ, ເກືອ .
9. ເຄື່ອງມື PegBoard Display Hooks Shelves. ຂຸດເຈາະຮູໃນເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງກໍາແພງຫີນ. # ໂຮງງານຜະລິດ Pegboard. ແຜງອະລູມິນຽມ, ແຜ່ນເຫລໍກ ສະແດງເພດານສະແຕນເລດ Hooks Shelf Hanger Store ຈັດປະເພດເຄື່ອງມື, Plank Steel Plate ເຄື່ອງມືສໍາລັບການຕິດຕັ້ງກໍາແພງຫີນເຄື່ອງມືຖື Rack ຍາກຄະນະກໍາມະການ
10. FRP Stair Tread Nosing ຂັ້ນຕອນປົກປັກຮັກສາຫົວ, Corner, Brow, Fiberglass,ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ Fiberglass, ປົກຫຸ້ມຂອງ fiberglass, ແຂນດັງ, eyebrow, ຝາຄອບ staircase ອອກແບບເພື່ອທົດແທນ ຜ້າຢາງພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນລາກຢາງຢາງພາລາຊັ້ນສູງຢາງພາລາຖາດຢາງພາລາຖົງຢາງພາລາສໍາລັບຢາງຢາງພາລາ ພື້ນຢາງ playgrounds ອອກກໍາລັງກາຍ, ສວນສາທາ, ໂຮງຮຽນ, gyms, ທັງກາງແຈ້ງແລະໃນລົ່ມ
11 hdg, / ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດຂອງ Grating anchoring ອຸປະກອນການແນບໄດ້ Saddle ແກ້ໄຂ Table Clip Clamp ດັດ Lock ທີ່ສໍາຄັນ Fastenal ໃນອຸປະກອນ Fastener locking ຄລິບແນ່ນອນດ້ານເຫຼັກແຜ່ນ sieve, ເຫລັກສະແຕນເລດ /. ເຫລໍກສະແຕນເລດທີ່ມີຊີມມ້ວນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສະຕິກເກັດສະແຕນເລດທີ່ໃຊ້ໃນການຍຶດເອົາເສັ້ນໃຍສັງກະສີຫຼືແຜ່ນສະແຕນເລດ. ແກນເຫລໍກສ່ວນປະກອບ zinc plated ແຕ່ລະແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜ່ນແກນເພື່ອພື້ນຖານດ້ານລຸ່ມ. ລະດັບສາມາດປັບໄດ້. ທັງສອງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກຂະຫນາດຕ່າງໆທີ່ເຫມາະສົມກັບຂະຫນາດຂອງຕາຫນ່າງແລະຂະຫນາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
12. ຂອບ Tree Guard Grating Paver Frame Cover Grate Frame ປະມານພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.FRP ເຕົາເຫລໍກເຫລໍກພາດສະຕິກແຫວນໃຫຍ່ / ກອງ / ເກຍຄວາມປອດໄພຖະຫນົນຄວາມປອດໄພຂອບກອບຂອບສະຫນັບສະຫນູນ ໃຊ້ສໍາລັບການຕົບແຕ່ງ ປູກຝຸ່ນເພື່ອຮັກສານ້ໍາງ່າຍ. ມັນຍັງປົກປ້ອງລົດໃນເວລາທີ່ແລ່ນຜ່ານ. ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Land Garden Scape. Tough tough Fiberglass slippery finished
FRP Manhole Cover Grating (New Made for Fiber Optic) ເຮັດໃຫ້ສັ່ງຕັດຕາມຂະຫນາດໃດໆ (Tailor Made) ທັນທີພາຍໃນ 2-3 ວັນ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ບໍ່ແມ່ນດິນຟ້າອາກາດທີ່ສົມບູນແບບຕະຫລອດຊີວິດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ງ່າຍຕໍ່ການເປີດຝາປິດບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍ. ອອກແບບເພື່ອທົດແທນແຜ່ນປົກແຜ່ນເຫຼັກ.
14. ອາຄານເກົ່າ ເພດານເຄືອບເພດານ. Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາບອດ Panels Wall Panels, Partition Screen ທົ່ວໆສີ, ການຄວບຄຸມ Anti-Bird, ມ້ວນ Grating Decorative Mini, ແຜ່ນແພ Sculpture ເປີດເພດານຫ້ອງ
15 ທີ່ຢູ່ຫລໍ່ / ກ່ຽວກັບແບບຟອມ Tie ເປັນອຸປະກອນເສີມ, ລະບົບ ສໍາລັບ Reinforced SLAB ຊັ້ນມັງ Wall ໃຊ້ການກໍ່ສ້າງອາຄານອື່ນ ໆ Formwork ຂອງ TIES ໄມ້ໃນ Carpenter Design- ລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້: Dywidag ລູກຫມາກຂອງເຫຼັກ ROD ກັບກະທູ້ຕະຫຼອດເສັ້ນ (rod ວັດ) ໄດ້ + Wingnut (ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງປີກ) + Stopper ນ້ໍາ + ເຫຼັກໂກນ / Hole. Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Suppliers ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບ formwork ຂອງທຸກປະເພດ, ເຊັ່ນ: ການຮັກສາຝາທີ່ມີສີມັງ, ປະກອບດ້ວຍຮູບແບບເຫຼັກມໍຂະຫນາດໃຫຍ່ການແຂ່ງຂັນ Tyne, Wing ແກ່ນ, ຂໍ່ກະດູກ, ນ້ໍາ, ແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້, ຫົກຂອງຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ຄູ່ຮ່ວມງານ, ໄລປະຕູ, locks, ປວດຂໍ້ກະດູກຕອບສະຫນອງ. cheerful, ຮາກ, clamp ພາກຮຽນ spring, clamp wedge, ຖານພາດສະຕິກຂອງ girder ເຫຼັກກັບ polypropylene ໂກນ,
GRP / FRP / ໄຟເບີກາດ / Composite ສໍາລັບ Grating ແລະ Manhole ປົກ.
ວັດສະດຸເທກໂນໂລຍີໃຫມ່ ຂະບວນການຂອງເສັ້ນໄຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະມີນ້ໍາຫນັກເບົາເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ນສູງກ່ວາຂອງທາດເຫຼັກ, ບໍ່ corrosion, ບໍ່ corrosion. Thieves ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະກວມເອົາມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນກິ່ນດີ FRP, Flexible grating ຄຸນນະສົມບັດການ:
ຄຸນສົມບັດ grating FRP (Fiberglass + ້ໍາຢາງ). ພາດສະຕິກ (PE / ABS / PVC)
1. ບໍ່ມີກອບ rust corrosion ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຈາກສານເຄມີເຊັ່ນ: ໂຊດາໄຟ, ແລກ, ກົດກໍາມະຖັນ, ແລະອື່ນໆ, ສາມາດຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມແລະຕາຕະລາງກັນສານເຄມີການທົດສອບແສງ UV
2. ຊີວິດການບໍລິການສູງກວ່າ 50 ປີແມ່ນຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ເຊັ່ນຄວາມຖີ່ຂອງການຕິດຕໍ່ກັບສານເຄມີຢູ່ໃກ້ກັບທະເລຫຼືນໍາໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມສູງ. (ວິທີການແກ້ໄຂໂລຫະ, ການກັດກ່ອນ, ການກັດກ່ອນ, ທາດເຫຼັກ ປະສິດທິພາບ)
3. ພືດເຊັ່ນ. ສາມາດເລືອກສີໃຫ້ເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ອຸນຫະພູມທີ່ອຸນຫະພູມ: Insulated, ບໍ່ມີ conductive, ບໍ່ມີການລ້າງ, ສີຟ້າຫຼືສີຂີ້ເຖົ່າ. ເຄື່ອງດູດຊ໊ອກໄຟຟ້າ
4 ນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າເຫຼັກ. ແຕ່ສູງເທົ່າກັບເຫຼັກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາໄວແລະງ່າຍດາຍ.
5. ລາຄາໃກ້ຊິດກັບທາດເຫຼັກ. ສູງກ່ວາເຫຼັກກ້າ galvanized, ແຕ່ FRP ບໍ່ມີບັນຫາການລັກ. ປິດແຫນ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະທັບຕາຢາງພາລາ. ການປ້ອງກັນກິ່ນດີ No problem bending ງຽບເວລາລົດຜ່ານທາງຫນ້າ.
ກໍາບັງໄຟຟ້າ (ບໍ່ແມ່ນການດໍາເນີນການ) ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນແລະແສງສະຫວ່າງ UV ກອບມີຮອຍແຕກຄື ABS ຢາງພີວີຊີ, ເອກະສານ poly
8. ການນໍາເຂົ້າຈາກເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາດຕະຖານ EN124 ທົ່ວໂລກ
CHANCON: ຈໍາຫນ່າຍໄດ້ແລະຜູ້ຜະລິດຈາກໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີການໂຮງງານຜະລິດໄດ້.ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາດີເລີດໃນມູນຄ່າເພີ່ມວິສະວະກໍາ / ການອອກແບບຖາປັດຕິຍະສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ FRP. ບໍລິສັດຜະລິດແລະຂາຍ Channel ຄຸນສົມບັດ FRP Grating, ລາງລົດໄຟ rack, ການລະບາຍ, walkway ການຮູ້ບຸນຄຸນ. ເສັ້ນໄຍພືດທີ່ (FRP) ສໍາລັບການທົດແທນຂອງໂລຫະສະແຕນເລດ, ອະລູມິນຽມ, ທອງເຫຼືອງ, ທອງແດງ, ເຫຼັກສຽງໂຫວດທັງຫມົດ, ເກດທາດເຫຼັກ ductile ຊຸບສັງກະສີຊຸບກັນວາໄນພັນທະມິດສໍາລັບການກໍ່ສ້າງການເກັບຮັກສາເຢັນ, ການລ້ຽງສັດ, ຫມູກະສິກໍາ, ສັດປີກ, ສັດປີກ cage. ຫມາ, tunnels, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ທ່າເຮືອ, ສະພານໃນໄລຍະທາງມໍເຕີເວ flyovers ໂທລະສັບໄຟຟ້າ. ສາມມິຕິລະດັບໂຄງສ້າງ, ກໍາແພງ, cliffs, ພູຜາປ່າດົງ, ອາຄານ, ສະຖາປັດຕະ, skyscrapers, ສະຫນາມບິນ, ຂະຫນາດໃຫຍ່ສາຍວາງໃນທາງເຄມີແລະການກັ່ນຕອງພືດ, ໂຮງກັ່ນ, ໂຮງງານໃນຕ່າງປະເທດ, ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສຂະແຫນງການ, Tunnels.
Grating_Manhole_Expert | ຜະລິດຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍ | ຈໍາຫນ່າຍທົດແທນຂາຍ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ || CHANCON: ຈໍາຫນ່າຍແລະຜູ້ຜະລິດຈາກໂຮງງານຜະລິດໂດຍກົງ ຂອງບໍລິສັດ Chantilly Connecticut ຜະລິດແລະຂາຍ FRP grating gutters ລະບາຍຄວາມກະຕັນຍູ. Grille Bo lid cover ລະບົບທໍ່ນ້ sewage
#Mobile (ການຂາຍ). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 ໄດ້ Tel: 02 451 0780-1, ໄດ້ Fax: 02 451 0786
E-mail ໄດ້: Mkt@chancon.co.th | @ Line ທີ່: @iCHANCON ສາຍ (iD ແມ່ນ): ICHANCON
ດັບເວັບໄຊທ໌ :.Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http: // Fiberglass Grating – .com ໄດ້ pitting ຫລວງທໍ່ຫລວງ.
ໃນ FaceBook: Www.facebook.com/. GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
TwitterShare: https ໄດ້ :. //twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh
Premium Manhole Grating Specialist | ກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ fiberglass mesh ຢູ່ແຄມແຂນ. FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING | ຖະຫນົນຍ່າງ ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER | ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating | ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating | ເສຍຈັ່ນຈັບ sieve ໃບດ້ານຄວບຄຸມຕາມ sidewalk ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating. Scupper | Egg ຜ້າມ່ານກະດານ Crate slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ | ກວມເອົາດັງຂອງທ່ານໃນໄລຍະແຂບ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. ແຜ່ນພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector: FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ Gritted Plate ແຜ່ນ | plank Winnipeg ຄະນະເຫຼັກ perforated ກໍາແພງ hook ສາຍສຽງວົງເລັບແບບປຸ Pegboard Hook Shelves ເຄື່ອງມື Racking ການເກັບຮັກສາ. DIY Kit | wwwchanconcoth | Line @: @iCHANCON | Email: mkt @ chanconcoth | Mobile (Sales): 081 932 7894,061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1
သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံး
ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းပြီးဆုံးကာကွယ်ပေးသည် FRP သံမဏိသံပလတ်စတစ်နဲ့ Big သစ်ပင် Ring ကို / စောင့်တပ် / ခြစ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ်ဖုံး Frame ကပံ့ပိုးမှု ဘောင်ကင်အဆင်သင့်သစ်ပင်၏ခြေရင်းကာကွယ်ပေးသည်။ အလှဆင်ဘို့တပတ်ရစ်အလွယ်တကူအမြစ်ယူမြေဆီရေလောင်း။ ဒါဟာအစကိုထိပုတ်ပါအမြစ်မှတဆင့်ကားတစ်စီး Chase ကာကွယ်ပေးသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမြေဥယျာဉ် Scape ရှုခင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ခွန်အား ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်အစားထိုးကင်ယာဉ်ရပ်နားစာရေးပိုးကောင်များကွန်ကရစ် / ပန်းရန် Block ကိုခင်းယူနစ်အစားထိုးအလှဆင်မြက်ခင်းအဆင်သင့်လမ်းခင်းပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့။
frame ကင်သစ်ပင်ပင်စည်ကိုကာကွယ်ပေးသည် FRP / PP သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame က ဖုံး။
FRP / PP / ကျဇယားသံ / Composite Big Tree Ring ကိုစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Frame ကဖုံး, သစ်ပင်ကွင်း / သစ်ပင်စောင့် / သစ်ပင်ခြစ် / တုတ်ကျင်းခြစ်, FRP Tree ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့, သစ်ပင်ဆန်ခါများအတွက် Frame ကဖုံး, အလှဆင်သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့ဖုံး Frame က FRP Big သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့မှို။ ဆန်ခါ, အလင်းအလေးချိန်နှင့်သစ်ပင်ကိုယ်ရံတော်ဆန်ခါအကြမ်းခံ FRP ပစ္စည်း, ဥယျာဉ် Decoration နှင့်ဖုံးဆန်ခါ Landscaping ပြင်ပခြစ်ထုတ်ကုန်, သစ်ပင်အမြစ်ပင်စည်အကာအကွယ်အစောင့်ဆန်ခါ, ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သစ်ပင် Paver ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း, လမ်းသွားလမ်းလာကို Safe Tree ခြစ်ခြင်းနှင့်တုတ်ကျင်းခြစ်, Linear ဆန်ခါ။ လမ်းဘေးတုတ်ကျင်းဆန်ခါထောက်ခံမှု, သစ်ပင် bollards န်းကျင်ဖောက်ထားခင်းလမ်းခင်း။
ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်လောင်းပြီးနောက်သင်မည်သို့သင့်ရဲ့သစ်ပင်ကိုအလှဆင်နိုင်မလဲ? ငါတို့သည်သင်တို့၏သစ်ပင်နှင့်ကြမ်းပြင်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကိုက်ညီမှပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ အလွယ်တကူပရိသနှင့်ဖျက်သိမ်း, ထိရောက်စွာသစ်ပင်အခြေစိုက်စခန်းအလှဆင်ဘို့ဒီဇိုင်း FRP Big သစ်ပင်ဆန်ခါ။
1-သည့်အမျိုးအစား: အ PP (polypropylene) သစ်ပင်, စောင့်တပ်ဖွဲ့သည် Frame ကခြစ်, Paver အဆိုပါဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
တစ်မြက်ဖျာများနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်းဧရိယာနှစ်ဦးစလုံးဖွစျဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ယာဉ်ရပ်နားများအတွက် ဂေါက်ကွင်းအပေါ်နေသောလူသွားလမ်း ဟင်းလင်းပြင်ဧရိယာပန်းခြံမှတဆင့်ပြေး။ နှင့်လူနေအိမ်
ဘယ်လိုသစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်ကဏန်း pad ပါ။ လွယ်ကူစွာ။ တစ်ဦးစံ 35x35cm နှင့်အတူအသုံးပြုဒါမှမဟုတ်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်9စာမျက်နှာများနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦး Lego မှသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးဘို့အလယ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ထားခဲ့ပါနဲ့တူတစ်ခုချင်းစီ pad ပါအတူတကွချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Type-2: FRP ဖန်မျှင်ထည် Tree, ကိုယ်ရံတော်, ဆန်ခါ, Paver သည့် Frame ကအဆိုပါဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်
Tree, စောင့်တပ်ဖွဲ့, ဆန်ခါ, Paver သည့် Frame ကအဆိုပါဖုံးအထူး
1 .: နျ Standard ကတော့ Size: ။ 1200 x ကို 1200 မီလီမီတာအောင်မြင်မှုများထူထပ်သော 30mm Tree, Hole ဆက်သွယ်ပါ။ ။ 65 စင်တီမီတာအဖုံးအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ အသက် 30 မီလီမီတာအထူနှင့်အတူ 1.2×1.2 မီတာတိုင်းတာခြင်းအဖွင့်မိသားစုသစ်ပင် 65 စင်တီမီတာ။ ။ 4pcs / ခြိနျးအပါအဝင်
2. : ယက် Frame ကတစ်ခုချုံ့နှင့်အတူကိုပွငျဆငျဟာ Rectangular ပုံစံ output ကိုအတူဒီဇိုင်းထဲမှာဖြာတစ်ခုပြည်ထဲရေးဟာတစ်ဂန္ထဝင်လေးပိုငျးပိုငျး set သင်္ချိုင်း။ ။ set ကို4ချစ်ပ်, အခွံမာသီးများပါဝင်သည် ပစ္စည်းဘောင်ကင်သစ်ပင်ပင်စည် FRP ပစ္စည်းသံမဏိ / လူမီနီယံကိုအစားထိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ပေးသည် 3. ဖန်မျှင်ထည်စစ်ကူ Polymer အမျိုးအစား (FRP) ။ အလူမီနီ / သစ်သား / သံမဏိ ပိုက်ဆံအဘို့အကြမ်းခံ 100 ကျော်နှစ်ပေါင်းတစ်သက်တာအာမခံ။
4. ပရီမီယံကမ္ဘာ့ဖလားအတန်းအစားအရည်အသွေးပစ္စည်း: မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်ဥရောပ, အမေရိက, ဂျပန်, တောင်ကိုရီးယား, စင်္ကာပူတွင်ရောင်းချ, မလေးရှား, အလင်းအလေးချိန်ကနေတင်သွင်းတစ်တန်းပစ္စည်းများ: install လုပ်ရန်မလွယ်ကူ, ဒီဇိုင်းအတွက်လှပသောအရောင်များကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ပစ္စည်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါး
5. ချေးနှင့်သံချေးခုခံ: တစ်သံမဏိနှင့်အတူ Non-ပျက်စီး corrode သို့မဟုတ်သံချေးချေး-ခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, အပူခံနိုင်ရည်, ဓာတုချေးခဲ့
6. ဓာတု & မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ : လျှပ်ကာ, အပူနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများ, ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်မပလပ်စတစ်နဲ့တူကြွပ်ဆတ်။ သို့မဟုတ်အခြားအားကောင်းတဲ့ဓာတုပစ္စည်းနေ, ဒဏ်ငွေသံမဏိအစားထိုးအသစ်တခုပစ္စည်းကိုဆီးတား
Fusion ကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသော FRP ပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သောမဟုတ်ခဲ့ကြောင့်ခိုးမှုဖြေရှင်းနိုင်:
7 အဘယ်သူမျှမပြန်လည်ထူထောင်ရေးတန်ဖိုး။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာမလိုချင်တဲ့
3-အဆိုပါအမျိုးအစား: အ FRP ဖန်မျှင်ထည်ဖြတ်တောက်ခြင်း ပင်, ကိုယ်ရံတော်, ထို Frame ကခြစ်, Paver အဆိုပါဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးဘောင်ကင်၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုသစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ 2-3 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းချက်ချင်းပေါ့ပါးအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်စေ) အမိန့်မှ cut, သံချေး, အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း, သက်တမ်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်လျှောက်လုံး corrode မထားဘူး။ သွန်းသံဆန်ခါမူရင်းဗားရှင်းထားခဲ့ပါအစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
အဘယ်သူမျှမပြန်လည်တန်ဖိုးကိုလည်းမရှိကတည်းကဒီထုတ်ကုန်, တပ်ဆင်ခြင်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အဆင်ပြေ၏ဖော်ထုတ်ခြင်း, ရောင်စုံနိုင်ပါတယ်လုံးဝဆန့်ကျင်ခိုးယူ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ အနာဂတ်ကိုသွန်း manhole အဖုံးမှာတော့တဖြည်းဖြည်းပေါင်းစပ်ပစ္စည်း manhole အဖုံး, ကြီးမားတဲ့အလားအလာစျေးကွက်, အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ် manhole အဖုံး၏ပေါင်းစပ်ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။ ခေတ်သစ်ရိုးရှင်းပြီးလှပတဲ့အမြင့်ဆုံးကျိုးအစွမ်းသတ္တိ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ပင်ကိုယ်ရံတော်အသွင်အပြင်။ 90 ရာခိုင်နှုန်းနှုန်းမှာ Cut, ဘိလပ်မြေနှင့်အပင်၏အသီးကိုအဆုံးမှာမြက်ခင်းအပြည့်အဝလေနှင့်နေရောင်ခြည်ထိတွေ့နိုင်အောင်သံအဖုံးများ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, ကောင်းမွန်သောရေနုတ်မြောင်းဖြတ်နေကြသည်ကိုသွန်းလေ၏။ hot-သို့ကျဆင်းလာဇင့်မျက်နှာပြင်ဟာအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ချေးနိုင်ပါတယ်။ device ကိုရှိသည်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ကျယ်ပြန့်စည်ပင်သာယာလမ်း, ဥယျာဉ်, ရင်ပြင်နှင့်အခြားစီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver ၏ဒီဇိုင်းနှင့် Idea Frame ကဖုံး ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည် မြို့တမြို့ Boulevard တလျှောက်ညား Spreading သို့မဟုတျဖနျတီး တဲ့လူနေအိမ်ထောင်ဝင်းထဲမှာအရိပ်ပဿဒ္ဓိတစ်ခုအိုအေစစ်, သစ်ပင်များဆိုမြို့ပြ setting ကိုတစ်ဦးအလှတရားဆောင်ခဲ့ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ပင်ခြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်။မှအထိကြောင်းဒီဇိုင်းများနှင့်အတူအလှအပ, ယင်းအထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်ပီပီမှလှပသောရိုးရှင်းတဲ့။ တစ်ခုချင်းစီ patterned လွယ်ကူရေလောင်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းပေးစဉ်အခါ, အမြစ်ဘောလုံးကိုနှင့်အမြစ်စနစ်ကာကွယ်မှုပေးခြင်း, လုံးဝနီးပါးမဆိုဗိသုကာ setting ကိုဖြည့်ဖို့လက်စသတ်နေသည်။ စိတ်တိုင်းကျထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်ပါ, အားလုံး။ ဖန်မျှင်ထည် (FRP) ၏ဖန်ဆင်းသစ်ပင်ခြစ် ခြင်းနှင့်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ပင်ခြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်တွင်အမျိုးမျိုးသောသစ်ပင် caliber နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သစ်ပင်ကကျေးဇူးတင်ရည်ရွယ်သစ်ပင်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကိုသစ်ပင်အဖွင့်နှင့်အတူအမိန့်ထုတ်သင့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ပင်ဆန်ခါစာရင်းမရရှိနိုင်စံသစ်ပင်အဖွင့်အရွယ်အစားရှိပါလိမ့်မယ်။ က site ပေါ်တွင်သစ်ပင်ဖွင့်လှစ်ချဲ့ရန်လိုအပ်သောဖြစ်သင့်, ခြစ်စံအဖွင့်ဖို့အထဲကအဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ အဖွင့်တိုးချဲ့အတော်လေးလွယ်ကူ Tree ခြစ်မြို့ပြ hardscape သို့သစ်ပင်များပေါင်းစည်းကူညီပေးဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဧရိယာကျော်လူသွားလူအသွားအလာခွင့်ပြုနေစဉ်သစ်ပင်ခြစ်သစ်ပင်များအတွက်အာကာသသည်။ သူတို့ကသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဧရိယာထဲမှာပေါင်းပင်များနှင့်အမှိုက်စုဆောင်းခြင်းဖိနှိပ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ GRATINGTHAI အရွယ်အစား, ပုံစံမျိုးစုံ, စတိုင်များနှင့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတခုအမျိုးမျိုးသောခင်းကျင်းပေးထားပါတယ်။ GRATINGTHAI? သစ်ပင်ကကျေးဇူးတင်ယူနစ် pavers လုံးဝသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုနေစဉ်သစ်ပင်ဆန်ခါ၏ function ကိုဝတ်ပြုကြလော့။
သစ်ပင်, ဆန်ခါ Materiales ပု, Paver ထုတ်ကုန်: Tree ခြစ် ,, တုတ်ကျင်းခြစ် ,,, ယိုစီးမှု, ဆန်ခါ,, bollards : ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်သော Are
Wish ပလပ်စတစ် PP (polypropylene ထားသည့်အတိုင်း 1. PP Tree, High Quality နှင့်အတူခြစ် :: နျ Standard ပစ္စည်း, မဆိုအရွယ်အစားသည် Connection ကိုဒီဇိုင်းကို Join ။ ) တစ်ခက်မျက်နှာပြင်ခြစ်ခုခံကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ တည်ငြိမ်မှုလွယ်ကူသောပုံပျက်သောမဟုတ်ပါ Excellent ကလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ Shannon လေဆိပ်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အများအပြားခင်းပြားသြဇာအဘို့ခိုင်ခံ့နှင့်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများ။ အဆိုပါငါးကြင်းရေကန်ပေါ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါခင်း။ ကင်အဖုံးရေနုတ်မြောင်းရေကန်ပတ်လည်ရှိအိမ်သူအိမ်သားတစ်ဝှမ်းရေကျင်း, တိုက်ခန်းများ, ကျောင်းများ, စက်ရုံတွေ, အားကစားကွင်း။
2. Cast ကိုကျဇယားသံ: ကျဇယားသံဖြစ်ပါတယ် ။ ။ အလေးချိန်အချိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဘို့ခွင့်ပြုမီးခိုးရောင်သံထက်ပိုပြီးပျော့နှင့်လျော့နည်းကြွပ်ဆတ်အကောင်းဆုံးပိုမိုမြင့်မားခွန်အားနှင့်အောက်ပိုင်းအလေးချိန်လိုအပ်သည့်အခါ Post-စားသုံးသူသတ္တုအမြင့်ရာခိုင်နှုန်းပေမယ် Pre-စားသုံးသူပြန်လည်အသုံးပြုပါဝင်နိုင်သည်။ သတ္တုဆဲရေကန်သည်လိဒ်နျ Standard အကြောင်းအရာအဆင့်မြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေး
ဖြစ်သည်။ FRP, ဖန်မျှင်ထည် 3. : ။ အလားတူ Non-ပျက်စီး corrode သို့မဟုတ်သံချေးဂုဏ်သတ္တိများ: ပထမဦးစွာလုပ်လက်စကျန်ရစ်တဲ့အခါမှာသံချေးဟာထူးခြားသောမျှော်မ, အရောင်စုံစတိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်း, အလင်းအလေးချိန်သေးဆဲခိုင်ခံ့လုပ်ပေးချေးနှင့်သံချေး, ခုခံသည်။ လျှပ်ကာ, အပူနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများ, ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်မဟုတ်ဘဲကျွတ်ဆတ်သောကြောင့်အက်: သံမဏိဓာတု & မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံသံချေးယဉ်, အပူခံနိုင်ရည်, ဓာတုချေးဖြစ်ပါတယ်။ စတင် အဖြစ်ကောင်းစွာသံမဏိအစားထိုးပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်, နေရောင်ကိုခံနိုင်ရည်, ဓာတုအသစ်သောပစ္စည်းများ။
ဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အံ့သြစရာအင်္ဂါရပ် (ထို FRP အထူး)
1) အလင်း, အမြင့်ခွန်အားနှင့်အတူအလေးချိန်: ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ Lightweight ကို install, လွယ်ကူသော
Non-ပျက်စီး corrode သို့မဟုတ်သံချေး: 2) ချေးနှင့်သံချေးခုခံ
3) ဓာတု & မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ: ။ Dielectric အပူကိုဆီးတားခြင်း နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများ, ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်မပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ရှေးခယျြနဲ့အခြားပစ္စည်းများနဲ့တူကြွပ်ဆတ်
)4အဘယ်သူမျှမပြန်လည်ထူထောင်ရေးတန်ဖိုးကို: အ Fusion ကို device ကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသော FRP ပစ္စည်းများငုတ်မဟုတ်ပါက Grand ခိုးမှုပြဿနာလို့ပဲ။ ဟောငျးနန်းတော်အတွင်းစျေးကွက်ဟုတ်။
ပုံနှိပ်စာရွက်များကျေးရွာအုပ်စု Laterite ကသဘာဝကျောက်ပြား, သစ်သားအခင်း, အတုဘိလပ်မြေ quicklime ခင်းအမှတ်အသားများဥယျာဉ်ရေကန်လျတ် Landscaping အတွက်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ပေါ်မှာ။
သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်အကြံပြုချက်များဥယျာဉ် “ပင်ခြစ်စောင့်” ကင်ဘောင် Decorating ။ ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ပါနှင့်တင့်တယ်
ယင်း “ပင်ခြစ်” ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်ကိုသိရန်ရယူပါ။ သစ်ပင်၏ခြေရင်းမှာ decorating ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသစ်ပင်အာဟာရရန်အရေးကြီးပါသည်။ အလွယ်တကူအမြစ်များရေလောင်း၏စောင့်ရှောက်မှုကိုလှည်း။ Taproot နှင့်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းကနေကို stem ကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုသို့သောမာအလုပျကနေမော်တာဆိုင်ကယ်နင်းအဖြစ်ကားတိုက်ရိုက် access ကိုအတူကားတစ်စီးပန်းခြံမှာန့ ်.
ယင်း “ပင်ခြစ်” ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်အသုံးပြုခြင်း။ ဒီဇိုင်းသို့အစိမ်းရောင်သစ်ပင်များတိုးပွားလာတစ် technique ကို။ ထိုသို့သောဘိလပ်မြေဟင်းလင်းပြင်အဖြစ် နှင့်သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရန် လူကြိုက်အများဆုံးမြေဥယျာဉ် Scape ရှုခင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။ frame ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည် တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။ တစ်ဆန်ခါတစ်ခုသို့မဟုတ်ကားပါကင်တွေအများကြီးကိုသုံးပါ။ အဆိုပါဒီဇိုင်းခဲ့သည်
ရောနှောသစ်ပင်များနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ဦးအချို့သောအတိုင်းအတာလိုအပ် မြို့ပြဘဝတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အခြားဒြပ်စင်များကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ်ပင်ခြစ်တစ်အလှဆင်အရသာဝင်စားနေစဉ် နှင့်ဒေသများပတ်ဝန်းကျင်ဖြည့်နိုင်စွမ်းပိုအရေးကြီးတာကသူတို့ကသစ်ပင်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးပေးအဖြစ်လူကူးလမ်းလျှောက်ရာလမ်းလုံခြုံ extension ကိုပေး။
ဆန်ခါ Grey ကသံပင်များအတွက် Cast အဆင်သင့်ကိုထုတ်လုပ်,
Grey ကဘားမား၏ Barry, Foundry စံနမူနာကို၎င်း, (Barry-ယာဉ်အသုံးပြုပုံ), ဘာမင်ဂမ်ဒီကဖြင့်ထုတ်လုပ်ဖြစ်လတံ့သောစံသံ, သွန်းခြစ်, သစ်ပင် (ထိုအဘောင်များ) ထုတ်လုပ်သည်။ မီးခိုးရောင်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသံကိုနှင်ထုတ် သစ်ပင်ခြစ် (နှင့်ဘောင်) အားလုံး Cast ယူနီဖောင်းအရည်အသွေး, ထိုးနှက်တွင်းကနေအခမဲ့, ကျုံ့ချွတ်ယွင်း, ရောင်ရမ်းခြင်း, အက်ကွဲကြောင်းများသို့မဟုတ်အခြားချို့ယွင်းချက်များဖြစ်ရကြလိမ့်မည် ASTM A48-83, အတန်းအစား 30. ဖို့ကိုက်ညီစေရမည်။ သတ္တုများပုံသွန်းယပ်, burrs အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ နှင့် slag ။
အဆိုပါလူမီနီယမ်ဆန်ခါအသင့်ဖြစ်ပြီလား Tree, Cast သုံးရန်
Alabama အဘိဓါန်၏ Barry, Foundry စံနမူနာကို၎င်း, (Barry-ယာဉ်အသုံးပြုပုံ), ဘာမင်ဂမ်ဒီကဖြင့်ထုတ်လုပ်ဖြစ်လတံ့သော Cast အဆင်သင့် Chassis ကိုလူမီနီယမ် Tree ခြစ်, (ထိုအဘောင်များ) ။ သစ်ပင်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုလူမီနီယံသို့ကာစ် ခြစ် (နှင့်ဘောင်) အလွိုင်း 319 အစည်းအဝေးတွင်ဖက်ဒရယ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် QQ-A-601 နှင့် ASTM B-26 ရလိမ့်မည်။ အားလုံး Cast ယူနီဖောင်းအရည်အသွေး, ၏ဖြစ်ရလိမ့်မည် ထိုးနှက်တွင်းကနေအခမဲ့, ကျုံ့ချွတ်ယွင်း, ရောင်ရမ်းခြင်း, အက်ကွဲကြောင်းများသို့မဟုတ်အခြားချို့ယွင်းချက်။ Cast ယပ်, burrs အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ နှင့် slag ။ သို့ကာစ်လူမီနီယမ်ကိုသဘာဝသဲ-သွန်းဖြစ်လိမ့်မည် finish ကို။
Foundry လှပသောသွန်းသံသစ်ပင်ခြစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ် စောင့်။အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုး၌တည်၏။ သင့်ရဲ့သစ်ပင်များကာကွယ်ပါနှင့်သင့် Landscaping စီမံကိန်းလူတန်းစားများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများတစ်ဦးထိတွေ့ add – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအတော်များများပင်သည်သင်၏မြို့, ရပ်ကွက်အတွင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီလိုဂို၏ပါဝင်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုပါ။ ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဦးမြို့လယ်လမ်းမအဘို့, တစ်ဦး quaint ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်သို့မဟုတ်အသစ်အားကစားကွင်းသို့မဟုတ်အပန်းဖြေပန်းခြံ, Neenah Foundry သင့်ရဲ့ exacting သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောသစ်ပင်ခြစ်သို့မဟုတ်အစောင့်တစ်ဦး line ကိုထုတ်လုပ်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းများ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်သာရရှိနိုင်, Jonite သစ်ပင်ခြစ်မစိုက်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သစ်ပင်များများအတွက်အာကာသပေး, အနပေုံသို့ပေါင်းစည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ပင်ခြစ် ADA လိုက်နာနှင့်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖော်ရွေအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ဤသည်ဆေးရုံများ, ဆေးခန်းများနှင့်လူနေအိမ်ဧရိယာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ပင်ခြစ်လူကြိုက်များစေသည်။ သစ်ပင်ကကျေးဇူးတင်သစ်ပင်များ၏သဘာဝအလှတရားတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတိုင်းအတာဖြည့်စွက်ထားတဲ့ညဥ့် illumination များအတွက်အလင်း၏အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကို၏ installation များအတွက်အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်အလင်းဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်ခြေစွပ်ခွင့်ပြုပါ။ သစ်ပင်ခြစ်နှင့်အတူ, သငျသညျအလွယ်တကူဒေသတစ်ခုသီးသန့်ဝိသေသလက္ခဏာပေးခြင်း, ညာသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်ခြစ်ပေါ်သို့တစ်ကော်ပိုရိတ်ဆောင်အယောင်သို့မဟုတ်စည်ပင်သာယာလိုဂိုဖောင်းကြွလို့ရပါတယ်။ beautify နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအပြင်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယုံကြည်သည်။ အမှန်ကတော့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များ၏စွမ်းရည်ကိုမထိခိုက်စေဘဲပစ္စုပ္ပန်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အနည်းဆုံး 30% အသစ်ပြန်လည်အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြစ်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းလျှော့ချလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အစိမ်းရောင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဒီဇိုင်း၌သင်တို့၏မိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်။
လမ်းများ, ပန်းခြံများ, ဥယျာဉ်များနှင့်လူသွားလူအသွားအလာတလျှောက်တလျှောက်လမ်းလျှောက်, သငျသညျအပင်တစ်ပင်၏ပင်စည်ပတျဝနျးကငျြအပင်တစ်ပင်ဆန်ခါကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားခြစ်သစ်ပင်အမြစ်များနှင့်စည်များအတွက်အကာအကွယ်အတားအဆီးအဖြစ်လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ခြစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထည့်သွင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသစ်ပင်၏သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဘဝတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်မသာ။ သူတို့သည်များစွာသောကြည့်ရှု (နှင့်သင်တန်း၏သူတို့သတ္တုသစ်ပင်အစောင့်အဘို့ဖြည့်တင်းရန်ဆောက်လုပ်ထားနိုင်ပါသည်), ဒီဟာသူတို့ရဲ့ယာဉ်အတွက်တည်ဆောက်, ကောင်စီနှင့်ရှုခင်းများအတွက်အလွန်အရေးပါသည်, ကျမတို့ကလည်းဘယ်သစ်ပင်ဆန်ခါဒီဇိုင်းများထုတ်လုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်အဖြစ်! Paige stainless အပင်တစ်ပင်ရဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဘဝကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကို dual နည်းပညာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဖြစ်သစ်ပင်များလိုအပ်အရေးကြီးသောယိုစီးမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းသည်။ သံမဏိကွက်ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါအဆိုပါရှုခင်းကနေရေကြီးမှုနှင့်အခြားညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ပေးသည်။ ကဆက်ပြောသည်ခံနိုင်ရည်နဲ့ဗေဒအယူခံဝင်ဘို့ငါတို့သံမဏိသစ်ပင်ခြစ်နှင့်အတူ coupled အဆိုပါရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ။ ဤရွေ့ကားထုတ်ကုန်ရှုခင်းတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အလွှာသို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အယူခံဝင်ပေးပါ။ နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်ပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်အဖြစ်များတတ်သည်သကဲ့သို့ကောင်းစွာမဆိုပေးထားသောအတိုင်းအတာ fit မှစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ မြင့်တက်ပေါ်တွင်လူဦးရေနှင့်အတူမြင့်မားသောလူသွားလူအသွားအလာအတွက်သစ်ပင်ခြစ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ပင်ခြစ်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့သတ္တုပြားနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အသွားအလာဒေသများဆန့်ကျင်ရှုခင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုပ်နေကြတယ်။ အလူမီနီသို့မဟုတ်သံချေးသွန်းသံကိုဖန်ဆင်းသောမြင့်မားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်သတ္တုအမြစ်ဇုန်သို့မဟုတ်တူးဖော်တွေ့ရှိဒေသအထက်သစ်ပင်အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်နေရာချနေပါတယ်။ ဤသည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာကြီးထွားအားပေးဖို့ကူညီပေးသည်။ ထို့ပြင်ကင်မြေဆီညစ်ညမ်းမှတဆင့်ကျသွားရာမှအမှိုက်နှင့်အထွေထွေစွန့်ပစ်စောင့်ရှောက်လော့။
သစ်ပင်များထဲသို့ပေါင်းစပ်ခြစ်များအတွက်စံပြ Are, သစ်ပင်တစ်ခိုင်မာရှုခင်းအဖြစ် အခြေစိုက်ပင်၏အသီးမှာအပျက်အစီးကန့်သတ်အဆိုပါသစ်ပင်များနှင့်အဆောက်အဦးတစ်ခုတက်ကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်ပေါင်း၏ Suppresing အဆိုပါကြီးထွားနေချိန်မှာပွင့်လင်းပြီးတော့နှစ်တန်းဆင့်သောမြေဆီလွှာဒေသများသို့ မှစ. အဆိုပါအန္တရာယ်များလျှော့ချ, လမ်းသွားလမ်းလာ, ကမြင်သည်။ ဆန်ခါ Tree ခြစ်ဘို့ခွင့်ပြုပါရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည် ပင်စည်ကြီးထွားလာအဖြစ်အတွင်းစိတ်ကွင်းဖယ်ရှားခံရဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လက်စွပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူသစ်ပင်ကြီးထွား။ သစ်ပင်ကကျေးဇူးတင်အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်များ။ ငါတို့သည်လည်းပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတစ်ခုအကွာအဝေးရှိသည် မရရှိနိုင်ကျဇယားသံထုတ်ကုန်။ အရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းအပေါ်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကို Call ။ အားလုံးအရွယ်အစားတစ်သွပ်ရည်စိမ် Angle နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် သံဘောင်။
အလှဆင်အပင်ကိုခြစ်၏ပြီးပြည့်စုံသောရောစပ်များမှာ ပုံစံနှင့် function ကို။အများအပြားစတိုင်များနှင့်ဒီဇိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, သူတို့က လေထုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသစ်ပင်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်မသန်မစွမ်းအက်ဥပဒေ (ADA) နှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့ပြားချပ်ချပ်လူကူးမျက်နှာပြင်ပေးစဉ်အခါ, အမြစ်များတစ်လမ်းကြောင်းကို rainwater ။ သစ်ပင်ခြစ်ဖို့ function ကိုနှင့်အတူအနုပညာပုံစံရောနှောနေခြင်း , သစ်ပင်အမြစ်များကာကွယ်ပေး stormwater စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်, သပ်သပ်ရပ်ရပ်စနစ်တကျနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းဘေးစင်္ကြံထိန်းသိမ်းရန်။ အစိမ်းရောင်အခြေခံအဆောက်အအုံ၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ပါနှင့်တိုးမြှင့ ကျန်းမာသစ်ပင်တိုးတက်မှုနှင့်အသက်ရှည်မြှင့်တင်အားဖြင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းမှအကျိုးခံစားခွင့်။ သို့ကာစ်-သံသစ်ပင်ခြစ်ထားကြသည် ကိုသူတို့ကြီးထွားအဖြစ်ကြာရှည်နှင့်သင့်သစ်ပင်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားသစ်ပင်ဆန်ခါနှင့်အဖြုတ် Choose သင့်ရဲ့အပင်တို့သည်အပြည့်အဝအလားအလာရောက်ရှိနိုင်အောင်စင်တာ။
ဒီဇိုင်နာပုံစံများစိတ်တိုင်းကျဂေါ့ဖြုတ်ရေးစင်တာလက်စွပ်ကိုက်ညီမှုရှိသည့် တုတ်ကျင်းခြစ်လုံခြုံရေး Bolt Leeds Access ကိုဆိပ်ကမ်းထောက်ပြသည်။
ရေကန်ရဲ့အစွန်းန်းကျင်ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိ, ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်ဆန်ခါ # ပြီးစီး # အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်, #Anchoring ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်, # ဇာတ်ကောင်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ။ ပစ္စည်းကိရိယာသော့ခတ်ကလစ်, # ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်း, #Egg သေတ္တာ, # ချွတ် panel က screen ကိုမျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် #Curbed သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Scupper ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ, #FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ကာကွယ်ပေးသူ #FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံကိုဖုံးလွှမ်း။ gritted ပန်းကန်စာရွက် # နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကလှေကားကိုဖုံးလွှမ်း။ # စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန်, မြို့ရိုးအချိတ်ကြိုးကွင်းချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက် perforated သိုလှောင် Tools များ DIY Kit, # ပျဉ်ပျဉ်ပြား Peggy သံမဏိပြားယူပြီး #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ်။
GFRP Composite သံမဏိ Gully သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ Expanded ။ , ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, Fastener Clip ညှပ်ဆန့်သံမဏိပြား lock Saddle သော့ခတ်, ကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut, ဦးထုပ်ကျဇယားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့လူကိုအပေါက်ကိုလက်နှင့်-Holstein ပိတ်အဖုံး, သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေးကိုနှင်ထုတ်ကုန်။ , အဖုံး, အဖုံး filter ကိုမိလ္လာကန်ပိုက်, manholes, manhole ဖုံးမိလ္လာရေ, ဦးထုပ်နယ်ပယ်။ အစိုင်အခဲစတုဂံအပေါက်, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ကွန်ကရစ်အဖုံး, ဖုံးနဲ့ရေကုသမှုစနစ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိပါ; ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သားသီချင်းများခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်စင်္လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်။ ရေနုတ်မြောင်း, အနံ့ကြောင့်စလစ်, သံလမ်း, mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်, DIY တပ်ဆင်ခလွယ်ကူသောအရှိန်မြှ။ သူ့ဟာသူ, မီးခွက်, embedded မျက်နှာကြက်ကို T-bar ကိုကင်တပ်ဆင်ထားသည်။ နံရံတစ်ခုပေါ်တွင်မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုး။ ခြံစည်းရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide partition ကို။ utility အလှဆင်မျက်နှာကျက်မြတ်သောအပတ္တာ slat လိုက်ကာ Fiat အာရဇ်ပင် pergola ညေ, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲ။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကိုပယ်ပြီး frosted ။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, လေဝင်လေထွက်ကင်အမှတ်တရ Panel များနေကာမျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, ဆိုင်းငံ့ ,. ရုံးနေရာတွေ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း, မျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်: ရောင်စုံအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးကို အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ရုံးနေရာတွေ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်: ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ရုံးနေရာတွေ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်: ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။
ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ် primer, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, စာရွက်အခင်း, ဖို့အတွက် walkway, ခြေလျင်ခင်းများနှင့်ရိုးရာ Park က။ field ဇာတ်စင်ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ သံချေး, ချေး, အပူ, မီး, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ခြ, မှို, ဖောကြိုက်နှစ်သက်မ Non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးဖြစ်ပါသည်, Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်, အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, အခင်းပြုပြင်, ဖျင်မျက်နှာပြင် Knack ။ , epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, အီးက c ရလွယ်ကူ Pot, epoxy ခင်း။ Polyurethane, PVC, ကော်, ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE စက်ရုံကြမ်းပြင်စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic သုတ်ဆေး, အခင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ , အက်ကြောင်းရေစိုခံတာ, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတု, ဒြပ်, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝပြုပြင်။ ပြန်လည်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ယိုစီးမှု, ခေါင်မိုးယိုစီးမှု, အခင်း, ဝတ်ဆင်, သက်ရောက်မှု, တောင်းဆိုမှုကိုန်းကျင်လျတ်မြောင်း။ အဆိုပါယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ
FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အလှဆင်အတွက် Root စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံး။ ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်းအဘို့လူကူး, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ်, profile များကို pultuded, ကေ့လှေကား, လှေကားအုံနင်းမဟုတ်သောဆန့်ကျင်စလစ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း, စံပြ ,. ပလက်ဖောင်း, တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, မျိုးတွင်, ဖန်သားပြင်ဝတ်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, လမ်းလျှောက်လမ်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်, gritted, minimesh, ဖင်နိုလစ်, ဘုံ, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း ,. ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားကြမ်းပြင်,နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုးကွက်, မြေတွင်း, sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်။ နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လျတ်, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး, polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC ကို ,. PET, PETG, Flat စာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထား, Hot Dip Electroforge အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, ကြေးဝါ, သွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု, ပေးသွင်း, Foundry ,. တရုတ်, GMP, HACCP, ISO ကို 1400, 900 အတွက်ကို လုပ်. , FDA က, Infosoft စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက် Approved ။Infosoft
GFRP Composite Manhole အဖုံး (အဖုံးပြွန်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါ) www.chancon.co.th အထူးကု Solutions ဆန်ခါနှင့်အပုံ installation ကို: အဆောက်အဦးအပြင်က Round Manhole မျက်နှာဖုံးများ, ရင်ပြင်, Rectangle, စက်ဝိုင်းမြို့ပတ်, ရိုးရှင်းသော Culvert Gully, Tile မြှောင်ဆဲလ်မျက်နှာကျက်ခြစ်လုပ်ကြံ။ , Pass ကိုလမ်းမြေအောက်ခန်းလမ်းဘေး, Manhole ချိတ်ပိတ်ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်ခင်း, လက်အပေါက် LIFT Lifter, ထွက်ကိုရှင်းလင်း, ခြံဝင်းသို့ဝင်ကြမ်းပြင်ပန်းရေချိုးခန်းယိုစီးခြစ်အင်တုံ, လူနေထိုင်ရာတုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆဲလ်ဖမ်း, အပ်ချုပ်သူ, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖုံး, ပိတျဆို့နတေဲ့ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ် Grey ကသံ, stainless အစားထိုး Casting ။ ကူးမှုပိုးဧရိယာ, အစားထိုးသံမဏိ, Wood ကသစ် WPC ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ, Checker ဘဲပန်းကန်, Fittings, သန့်ရှင်း, ပေါက် box ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းရံခင်းယူနစ်, ပန်းကန် drainer, Channel ကိုဖောက်တံ, သင်္ဘော, လေဝင်လေထွက် Valve, Filter ကို, ရေကူးကန်, စုပ်စက်, သင်္ဘော, ။ , ချေးခုခံဘောင်, ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေ ,.အမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်း, ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver ။
CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန် Shannon လေဆိပ် Shannon လေဆိပ်အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကင်အဖုံး အဆိုပါဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်အတူကြမ်းပြင် Mat စင်္ကြံစောက် footpath ။ လှေကားထိန်သိမ်း ပေါ့ပါး elevated ပြား, သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ရေကန်အဖုံးဖုံး ပယ်လက်စသတ်ပိုက်မျက်နှာဖုံး manholes ထောင်ဝင်းထဲမှာ utility ထုတ်လုပ်မှုပြား အဆိုပါကဏန်း pad ပါစက်တွေ သံချေးများနှင့်ချေးကာကွယ်မှုဓာတုပစ္စည်းများမှမိလ္လာစနစ်ကအထက်စာရွက်နေသောလူသွားလမ်း။ အဆိုပါကင်နှင့်ဘိုအဖုံးဖုံးအဆိုပါဖုံး Manhole တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူအထူးကုရဲ့ခြစ်ပြီးဆုံး
1. polypropylene (ထို PP) ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားခြစ်ပလပ်စတစ်ကင်ကိုလက်စသတ်။ PP ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ စင်္, ရေနုတ်မြောင်း, အလင်းအလေးချိန်, သံမဏိထက်စျေးနှုန်းချိုသာအစွမ်းသတ္တိကိုလူကူး။ ရေ, အရိပ်နှင့် Landscaping ကျောက်များနှင့်ထိတွေ့စိုစွတ်သောဒေသများရှိအသုံးပြုမှု, စက်ရုံဝန်းကျင်ကျောက်စရစ်မြေတွင်းငါးကြင်းကွန်ဒိုမီနီယံအိမ်ရာအဘို့သင့်တော်
2 ။လျှံစီးရေကူးကန်ပတျဝနျးကငျြကို ABS ရေကူးရေကန် spa လျတ် Draianage ခြစ်ပုံသွင်းထားဆန်ခါ။ ကို ABS ပလပ်စတစ်ကင်2စံ width ကို 25cm နှင့်အတူပြီးဆုံး။ ပြီးတော့ 30 စင်တီမီတာ။ သုံးစွဲဖို့နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်ပေါ့ပါး non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအင်အား ‘passes ။ စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် မရှိအဘယ်မှာရှိ pair တစုံတစျဆငျ့ကားတစ်စီး Chase တစ်ခုဘဲဥပုံ-shaped ကွေးနဲ့အတူသုံးနိုငျခဲ့
3. သံဆန်ခါသံမဏိရဲ့သတ္တုသွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating welding သံမဏိ mesh ဘို့အတွက် (HDG ,. ) အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Hotdip ။ ဆန်ခါသံမဏိအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာသံမဏိပြားပူ Dip ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကို CO2 စက်ရုပ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်သံမဏိလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရည်ပျော်ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပစ္စည်း HDG အားသာချက်ချထားတဲ့စေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက် rusting ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါခိုးယူအရွယ်အစား 25x100cm ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။
4 ။ဖိုင်ဘာဖန်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါ FRP ဖန်မျှင်ထည်ကင် / မှိုခြစ် “ဆန်ခါ FRP” အစားထိုးကင်, သံမဏိ / လူမီနီယံ။ ပေါ့ပါးဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးကနေဖန်ဆင်းတော်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုရှိပါတယ်, ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်, သံချေးခံနိုင်ရည်, ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည်အပူသို့မဟုတ်ချေးပါဘူး။ သူခိုးမလိုချင်ကြဘူး လြယ္ကူကို Maintenance 50-100 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးဝင်သောဘဝ, ရှေးခယျြမှု၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အဖြစ်ကြမ်းပြင်မှအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စံစာရွက်အရွယ်အစား 1.5x4M ။ သင့်တော်မြင့်မားသောပြား။ ဒါမှမဟုတ် 3-5 နှစ်ကအာမခံအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမည်သည့်အရွယ်အစားမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်
5. curbed, သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် (Drive ကိုအမြင့် Way ကိုခြစ် drain) ကျဇယားသွန်းသံကိုဖန်ဆင်းသည်။ အဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းဘေး၏ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းနှင့်ဘန်ကောက်
6 ။ကျဇယားသံ Manhole Cover ဦးထုပ်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံကိုနှင်ထုတ်စှနျ့ကွနှငျ့။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးနှုန်း 1 set ကို frame ကိုအတူဦးထုပ်များပါဝင်သည်
7. ဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ဘောင်နှင့်အတူ FRP Manhole Cover အဖုံး manholes ။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမခိုးယူရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည်မဟုတ်
8. ဒီဥသေတ္တာကင်, ပျံ့, Aquarium Divide, အလငျး Panel ကို, ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါးဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated
9. pegboard ချိတ်, စင်ပေါ်မြို့ရိုးအရဲ့ Display ကို၎င်း Tools များ panel က, Peggy ဘုတ်အဖွဲ့။ တန်တိုင်းရိုး၌အပေါက်စုဆောင်းခြင်း tools တွေဆွဲထားကြ၏။ Pegboard ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ # ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်များ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, သစ်သား။ မြို့ရိုးကိုအလှဆင်စက်ရုံ-စတိုင်မီးဖိုချောင်, သံမဏိစင်ပေါ် Pegboard Display ကိုချိတ်စင်ကြိုးကွင်း Store မှာ Tools များ Organizing တပ်ဆင်ထားစက်မှုဇုန်, # အတွက်အပေါက် , # တွင်းဖွဲ့စည်းသစ်သားပျဉ်ပြားသံမဏိစာရွက်။ ဆွဲထားပစ္စည်းများကိုအဘို့, Tools များ Holder ဖို့ခက်ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့သိမ်းတန်းသည်မြို့ရိုးကိုအသုံးပြုဖို့
10. ထို FRP, လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆိုပါဖုံးအဆင့်ဥပမာကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်။ ကြမ်းပြင် Mat ဖိုင်ဘာဖန်လှေကားထစ်နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကချော်။ အစားထိုးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပလပ်စတစ်ဖျာပလပ်စတစ်စာရွက် Anti-စလစ်ရော်ဘာခင်းလုပ်ကွက်, ရော်ဘာဘန်ပါ, ရေချိုးခန်းအတွင်းကျရောက်ကြောင်းရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာဖုန်မှုန့်, မီးဖိုချောင် non-စလစ်ရော်ဘာရေနုတ်မြောင်းပေါက်တွေရှိပါတယ်။ ရော်ဘာကြမ်းခင်းကြံ့ခိုင်ရေးကစားကွင်း, ပန်းခြံများ, စာသင်ကျောင်းများ, gyms, နှစ်ဦးစလုံးပြင်ပနှင့် Indoor
11. HDG / အဆိုပါသံမဏိရဲ့ခြစ်အဆိုပါကုန်းနှီးကလစ်ချုပ်ကိုင်ဆန်ခါပန်းကန်သံမဏိ, သံမဏိ / သော့ခတ် Fastener ကိရိယာပေါ်တွင်စားပွဲတင် Clip Clamp ပြုပြင်မွမ်းမံ Lock ကို key ကိုစွဲစေပီပြင်ပူးတွဲကိရိယာများ Anchoring ။ သံချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဇင့်ချထားတဲ့သံမဏိအဆိုပါဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအများစုဟာသံမဏိဆန်ခါတစ်ဖိုင်ဘာဖန်သို့မဟုတ်သံမဏိစာရွက်ပူးတွဲအသုံးပြုသည်သော့ခတ်။ ပုဂ္ဂလိကသော့ခတ်အောက်ကအလွှာတစ်ခုသံမဏိကွက်ပူးတွဲများအတွက်သွပ်ချထားတဲ့သံမဏိဒီဇိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သင်ကဒေါင်လိုက်ကိုင်ပေါ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူသုံးပါ။ ဖောက်သည်ဆန်ခါ၏တွင်း (Size ကို mesh) နှင့်တစ်ပန်းကန်ထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအာကာသရန်ချန်နယ်တစ်ခုစီကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
12. Tree, စောင့်တပ်ဖွဲ့သည် Frame ကခြစ်, Paver အဆိုပါဖုံးဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။ FRP သံမဏိသံပလတ်စတစ်နဲ့ Big Tree Ring ကို / စောင့်တပ် / ခြစ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ်ဖုံး Frame ကပံ့ပိုးမှု ဘောင်ကင်အဆင်သင့်သစ်ပင်၏ခြေရင်းကာကွယ်ပေးသည်။ အလှဆင်ဘို့တပတ်ရစ် အလွယ်တကူအမြစ်ယူမြေဆီရေလောင်း။ ဒါဟာအစကိုထိပုတ်ပါအမြစ်မှတဆင့်ကားတစ်စီး Chase ကာကွယ်ပေးသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမြေဥယျာဉ် Scape ရှုခင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ခွန်အား ဒါမှမဟုတ်အစားထိုးကင်ယာဉ်ရပ်နားစာရေးပိုးကောင်များကြမ်းပြင်မြက်ခင်းလမ်းခင်းပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့အဖြစ်ပြီးဆုံး
13. စိန်ပြားပေါ်တွင် FRP ဖန်မျှင်ထည် Checker ကို tool ကို: Manhole အဆိုပါရေဆိုးအတွင်းကောင်းစွာပိုက်ပိတ်ဖုံးခြစ်အစိုင်အခဲအဖုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ Glass ကို Fiber Mat ပြီးလေ၏။ FRP Manhole Cover ခြစ် (စိတ်တိုင်းကျဖို့လုပ် ကိုမဆိုအရွယ်အစားအဘို့မှာ) နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအဖုံး manholes, ရေနုတ်မြောင်း, ဖိုင်ဘာဖန်။ 2-3 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းချက်ချင်းပေါ့ပါးအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်စေ) အမိန့်မှ cut, သံချေး, အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း, သက်တမ်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်လျှောက်လုံး corrode မထားဘူး။ စာရွက်သံမဏိအဖုံးခံရသောဒဏ်ချက်အား trotters အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဘိုမူရင်းသွန်းသံအဖုံးဗားရှင်း
14 , မျက်နှာကျက်အရိပ်၏ Trellis Grilles: Panel ကိုအလင်းကိုအတားအဆီးအလှဆင်အလင်းရောင်ဖုံးလွှမ်း slat ကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ကွယ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Slat လိုက်ကာ, awnings အဆိုပါပတ္တာအဖုံး pergola နံရံများ: Anti-ငှက်၏လေဝင်လေထွက်, ကင်ဆိုင်းငံ့ထားမျက်နှာကျက် texture, Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / အဆိုပါ Trellis အရိပ်, အအမှတ်တရ Panel များ Panel ကိုနေကာ, ထိုအရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေတစ်ဦးမျက်နှာပြင်, Partition ခွဲ, ခွငျထော, တစ်ဦးက Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ပရိဘောဂကုလားကာ, ပန်းပုများအတွက်ထိန်းချုပ်ရေးအရည်အချင်းပြည့်မီ, Grid ဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်ဖွင့်လှစ်
15 ။ ။Form ကိုတွဲချည်ပေါ် FORMWORKS / ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ထိုစနစ်ဖြစ်ပါတယ် Dywidag မျဉ်းတစ်လျှောက်လုံးချည်နဲ့လှံတံကိုသံမဏိ၏လည်စည်း (လည်စည်းလှံတံကို) + WingNut (တောင်ပံခွံမာသီး) + ရေအဆို့ + သံမဏိကန်တော့ချွန် /: စစ်ကူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသည်အမှတ်တရအသုံးပြုကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်ဟာ System လက်သမား Design- အပေါ်သစ်အသုံးပြုဆက်ဆံမှုများ၏အဆောက်အအုံအခြားဆောက်လုပ်ရေး FORMWORKS Hole ။ ဖန်မျှင်ထည် FormTies / ငြမ်းစျေးနှုန်းပေးသွင်း bracket ကအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိကွာဟချက်တွေတူပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ကရစ်နှင့်အတူရိုးကိုဆက်ထိန်းထားအဖြစ်အမျိုးမျိုး၏ formwork နှင့်အတူသုံးနိုငျကြီးမားသောသံမဏိကျောက်ဆူးပုံစံပြိုင်ပွဲ Tyne, Wing အခွံမာသီးများပါဝင်ပါသည်, အဆစ်, ရေ, အခွံမာသီး, ဤလှိုင်းတံပိုးရှိသော counterpart, သော့ခလောက်, သော့ခလောက်ခြောက်, အဆစ်တွေ့ဆုံရန်။ ရူ့, အမြစ်, နွေဦးညှပ်, သပ်ညှပ်, polypropylene ကန်တော့ချွန်နှင့်သံမဏိ girder ၏ပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်း
များအတွက် GRP / FRP / ဖန်မျှင်ထည် / Composite ခြစ်ခြင်းနှင့် Manhole မျက်နှာဖုံးများ။
ပစ္စည်းများနည်းပညာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖိုင်ဘာပေါင်းစပ် resins ၏အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွန်းသံထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပါပြီ, သံချေး corrode မထားဘူး။ သူခိုးတွေကလုံးဝတားဆီးဖုံးလွှမ်းရန်မလိုချင်ကြဘူးအဆိုပါ FRP, Flexible ခြစ်သည့်အင်္ဂါရပ်များကောင်းသောအနံ့:
•အလင်း, အလေးချိန်, အလွယ်တကူတာရှည်ခံအဆင့်မြင့်အစွမ်းသတ္တိ, installation ကိုသေတ္တာပြီးတော့ပြုပြင်ကြသူ Work, ဖြတ်ပြီးတော့ဆိုက်ကို ons တွေကိုတူး
•ထို crack သို့မဟုတ် Split ကို Add, warp- မချေးပြီးတော့မိုးလေဝသခုခံတွန်းလှန် (ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ), အများစုကဓာတုပစ္စည်းခုခံဆက်သွယ်ရန်
အဆိုပါ Do မကျင့်အပူသို့မဟုတ် Add လျှပ်စစ်မီးလမ်းကြောင်းကိုလည်း cable ကို (ကမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်) ကအကာအကွယ်ပေးတယ်•, insulator တွင်လည်း
•ပြင်ပမီးဘေး (-Self ငြိမ်းအေး) ၏တပတ်ရစ်ကိစ္စတွင် cable ကိုစေရန်, Added မီးသတ်နှောင့်နှေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပေးသနား
FRP (ဖန်မျှင်ထည် + ဗဓေလသစ်) ဆန်ခါပိုင်ဆိုင်မှု။ .vs ။ သံမဏိ .vs ။ ပလတ်စတစ် (PE / ကို ABS / PVC) ။
1. အဘယ်သူမျှမချေးချေးဘောင်, အပူနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို caustic soda, Borax, ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်အဖြစ်ဓာတုပစ္စည်းထံမှချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ခရမ်းလွန်အလင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်အပူချိန်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်စားပွဲပေါ်မှာစမ်းသပ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
2 ။ ။ အသုံးပြုမှု, ပင်လယ်အနီးရှိသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်အတွက်ဓာတုပစ္စည်းထိတွေ့၏ဥပမာကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်. 50 နှစ်ကျော်၏တစ်သက်တာ။ (သံချေး၏ချေး၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို။ ထိထိရောက်ရောက်)
3. သန့်စင်စက်ရုံ။ ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီရန်အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Non-ကူးမှု dielectric မီဒီယာလျှပ်စီးမဟုတ်ပါ: ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဇုန်အဖြစ်, အထူးသထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို, အဝါရောင်အပြာ, မီးခိုးရောင်, အနက်ရောင်, အစိမ်းလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းအဖြစ်အရောင်ကို အသုံးပြု. ။ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်တားဆီး
သံမဏိထက်ပိုမိုပေါ့ပါး4။ ဒါပေမဲ့ High-အစွမ်းသတ္တိကိုသံမဏိနဲ့မတူပဲ။ ရွေ့လျား၏ရလဒ်အဖြစ် installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြန်ဆန်လွယ်ကူ။
5. သွန်းသံများ၏စျေးနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားသောသံမဏိ FRP ရဲ့ Galvanizing, ဒါပေမယ့်အခိုးခံရဘူး။ အဆိုပါရောင်းချမှုစျေးကွက်နေရောင်ခြည်၏အက်ကွဲ, ခရမ်းလွန်ခုခံ, ခိုင်မာခြင်း, ခွန်အားပုံသဏ္ဍာန်သို့ဖြတ်ကြောင်းပေါ့ပါးသံမဏိ corrode ပါဘူး, အဟောင်းကိုမရပေ
မြင့်သော resolution နဲ့ 6. Fiber texture ။ လုံးဝတင်းကျပ်စွာပိတ်ထား က virtual အပေါ်တစ်ဦးကရော်ဘာတံဆိပ်ခတ် ကာကွယ်ရေး, အနံ့ကောင်းသော အဘယ်သူမျှမထိကပေါက် အသံတိတ်ကားကိုထိပ်မျက်နှာပြင်ကျော်သို့ပွေးလေ၏အခါ။ Dielectric (Non-ကူးမှု) အပူခံနိုင်ရည်နဲ့ခရမ်းလွန်အလင်းဘောင်ပလပ်စတစ်ကို ABS, PVC, စာရွက်နဲ့တူအဆိုပါ Poly အက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံ EN124 ထူထောင်ခဲ့သည့်ဥရောပ, အမေရိက, ကနေတင်သွင်း 8.
စက်ရုံမရှိရင်အဆိုပါဖြန့်ဖြူးပြီးတော့တိုက်ရိုက် မှစ. တစ်ထုတ်လုပ်သူ: CHANCON ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအများစုတန်ဖိုး excel အင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ FRP ထုတ်ကုန်များအတွက်ဒီဇိုင်းကို။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Channel ကို Properties ကို FRP ခြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချ, ထိန်သိမ်းသံလမ်း, ရေနုတ်မြောင်း, နေသောလူသွားလမ်းဆန်ခါကဆက်ပြောသည်။ သတ္တု, သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယံကြေးဝါကြေးနီ၏အစားထိုးများအတွက်ဖိုင်ဘာ (FRP), ကျဇယားသံတန်းဆောက်လုပ်ရေးအအေးသိုလှောင်မှု, မွေးမြူရေး, လယ်ယာဝက်, ကြက်ဘဲ, လှောင်အိမ်ငှက်သွပ်ရည်စိမ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ plating သွပ် plating, သံသွန်းလေ၏။ အဆိုပါကားလမ်းခုံးကျော်တံတားလျှပ်စစ်မီးဖုန်းကျော်ကခွေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ရေကာတာ, ဆိပ်ကမ်းဆီ, တံတားများ။ ဓာတုနှင့်သန့်စင်စက်ရုံများ, refinery, ကမ်းလွန်ပင်များ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ, ဥမင်လိုဏ်လမ်းများအတွက်တင်သောသုံးရှုထောင်အဆောက်အဦများ, မြို့ရိုး, ကမ်းပါး, တောင်ကြီးတို့, အဆောက်အဦးများ, ဗိသုကာ, မိုးမျှော်တိုက်, လေဆိပ်, အကြီးစား Cable ကို။
Grating_Manhole_Expert | ထုတ်လုပ်သူလက္ကား – လက်လီ | ကလေးစစ်သားတဖြန့်ဖြူးအရောင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး, အေးဂျင့်, ဖြန့်ဖြူး || CHANCON: တိုက်ရိုက်စက်ရုံထဲကနေဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Chantilly Connecticut ကုမ္ပဏီ FRP ခြစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းရေကျင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချပါတယ်။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း ဘိုအဖုံးဖုံးပိုက်မိလ္လာစနစ်က
#Mobile (ထိုအရောင်း) ။ : 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 သည်ဖက်စ်: 02 451 0786
E-mail ကို၎င်း: Mkt@chancon.co.th | အဆိုပါလိုင်း @: @iCHANCON ပုလိုင်း (ID ဖြစ်ပါတယ်): ICHANCON
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက် :.Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | ယင်းကို http: // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting ဟာ .com ။
FaceBook အပေါ်: Www.facebook.com/ ။ GratingThai, Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
TwitterShare: အဆိုပါ https :. //twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh
Manhole အထူးကုရဲ့ပရီမီယံဆန်ခါ | ဖိုင်ဘာဖန်, အဆင်သင့်ရေကန်ပတ်လည်မှာပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ။ FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ | အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး | ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ် | optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲဖုန်းများအတွက် Anchoring အဆိုပါဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ | ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Curbed အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ Scupper | အစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားကျော်ကသင်၏နှာခေါင်းကိုဖုံးလွှမ်း | ဥသေတ္တာ panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန် FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ: FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြား sheet | သံမဏိဖောက်ထားသောမြို့ရိုးချိတ်ဝါယာကြိုးချိတ် bracket ကဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များယူပြီး၏ Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ DIY Kit | Www.chancon.co.th | @ လိုင်း: @iCHANCON | အီးမေးလ်: mkt@chancon.co.th | မိုဘိုင်း (အရောင်း): 081 932 7894 , 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 ။